သောကြောင့်အမေရိကန်ပြည်မ-အ-စစ်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ၊စစ်ပွဲအမေရိကဖူးတရားဝင်ကြေငြာဆန့်ကျင်အမြောက်အတွက်တရာကိုလည်းနည်းပညာပိုင်းမမူတီဆုံးသတ်သေး၊မ-အ-စစ်ပွဲကိုအီရတ်စစ်ပွဲ၊အမ-အ-စစ်ဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲ၊အခြားမဟုတ်-အ-အီရတ်စစ်ပွဲစစ်။ ငါခန့်မှန်း သငျသညျဆောင်ခဲ့၏တဦးတည်းစစ်ပွဲအပြီးအမှန်တကယ်ကြေငြာဒါပေမယ့့်လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့သင်လည်းဆောင်ခဲ့ပြင်သစ်ကျော်ကြီးများ၏ဥရောပပါတယ္။ ဒါဗီယက်နမ်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီးလွတ်လပ်သောနှင့်ခိုင်ခံ့သောအားဖြင့်ပထမ ကျူးကျော်တပ်ဖွဲ့များ(အပါအဝင်)နှင့်လည်းဖြစ်လာအများကြီးလျော့နည်းဖိနှိပ်နှင့်အကျင့်ပျက်အတွက်သူတို့ရဲ့ကြန္ျမဴ(ည့္ဖုိသူတို့နေဆဲကွန်မြူ။)၊ကိုရီးယားစစ်ပွဲသည်လောလောဆယ်အငြိမ်း-မီးမီး၊အီရတ်ရှိ နှင့်ဖွယ်ရှိမည်မဟုတ်အဖြစ်တည်ရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးကြာကြာလျှင်မမူတီသားပြိုကျ၊အမိုးကအခုထိလည္းအၿငိမ္းခိုင်ခံ့သောနှင့်လည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နေဘိန်းထက်မီ။ ဖြစ်ခြင်းလျော့နည်းလိုလားသော်လည်း၊အမေရိကန်စစ်တပ်သည်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားပေမယ့်တစ်ဦးနှင့်အတူ ။ ဆိုလိုတာကကိုခံစားရသည္။အဆိုပါကောင်းသောရန်ပွဲအခါရှိနေကြတဲ့သံသယဖြစ်ကြောင်းရှိသောကြောင့်)ရေနံသို့မဟုတ်)ဂွန်ကုမ္ပဏီများဒီမိုကရေစီအစစ်အတွက်ငွေရှာဖို့မည်သို့ပင်အစစ်ရည်ရွယ်။ ကြိုက်လျှင်အမေရိကန်သို့သွားပါတယ်မာက္ကင္မ္ခ်ီသို့မဟုတ်အငတ္ခံ၊ငါသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုအစစ်သားခံစား သူတို့တစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့အရာအရပ်ဖြစ်စေကောင်း၊ဤသို့သူတို့အားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်အမှန်တကယ်အဆုံးသတ်ရလဒ်အတွက်တစ်ခုခုကြာ။ သင်သည်အဘယ်သို့မိုက်မဲ? လူပူးပေါင်းစစ်တပ်၊သူတို့ချင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဇ္ဈာယ်သူတို့ရဲ့စံ၏။ ဆိုရင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည္သူတို့လိုစစ်ရေးလုပ်၊အဘယ်ကြောင့်မတိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်စဉ်းစားလူတိုင်းအ ကောင်း-လက္ခ်၊နှင့်အလွယ်တကူပစ်သူတို့၏ဘဝနှင့်ကံဇာဖို့ချက်ချင်းပဲအခမဲ့တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအနေဖြင့်တိုင်းပြည်သူတို့ဂရုမစိုက်ပါဘူး? စေရိုးသားကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသဘာဝကိုင်၏ကိုယ်ကျိုးရှာမှု၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်- စသည်တို့ကို။ ရိုးသားပြီးပြောသင့်ဃလွယ်တကူပစ်ဆန့်ကျင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ကိုယ့်အတွက်လွှတ်ပေး၏စိတ်ကူးသူတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှအာဏာရှင်။ သင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လည်း၊သင်ဒီမှာဘာကြောင့်မစည်းရုံးအကြီးအကျယ်ဆန့်ကျင်- စည်းအဝေးနှင့်လျှို့ဝှက်တပ်မတော်နှင့်အုပ်စုများ။ သောကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်။ အလို၊ကြောင်းထည့္ပါနဲ။ ငါမသိကျွန်တော်တို့ကိုခဲ့သည်၊ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုနိုင်တီတတ်နိုင်ကျယ်ပြန့်ပညာေရးအခမဲ့။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ၊အတွက်ဖြစ်သင့် နိုင်ငံ့ကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားများအဖြစ်တွေ့ရတတ်နိုင်သမျှ။ မင်းအတွက်၊ယခုတွင်ငါသည်အဘယ်မှာရှိကိုသိနိုင်သောအမေရိကန်မှိုင်းမှလာ။ ရယ်စရာ။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့၊ပြင်သစ်ကူညီပြီးစဉ်အတွင်းတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲ၊ကျွန်တော်တို့နေဆဲဖြစ်တဲ့ကိုလိုနီအမွန္ပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုပြင်သစ်မှကျနော်တို့လိုမတတ်ဘူးလေဗ ။ စောင့်ဆိုင်း။ တဲ့တီအလှည့်အထွက်။ ကျနော်တို့အခွင့်အလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်း၊သင်မူကား၊ဆင်းသက်ခဲ့ရသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်သင်စတင်သောကျူးကျော်။ ငါဘာသာျပန္ခ်က္တွေ့တဲ့ကောင်လေးထံမှအနားကိုယနေ့နှင့်သူ့ကိုမေး:သင်အဂၤလိပ္စ။ ဟုတ်ကဲ့၊ကြားခဲ့သည်။ ခင်ဗျားကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြော။ စစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွက်ဒီလိုသွားကြပြီဒီလိုတွေ့ဆုံပြင်သစ်ကောင်လေးနဲ့သူ့ကိုမေးရသည္။ ကျွန်တော်တွေ့အမေရိကန်ကောင်လေးနဲ့သူ့ကိုမေး:သင်စကားပြော။ မကြားခဲ့သည်။ ထိုအခါအဘယ်အရာငရဲသင်အကျင့်ကိုကျင့်သောအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသငျသညျအဆီ-နို့စို့လို့ပြောလိုက်တယ်။ ဘယျသို့အနည်းငယ်အမေရိကန်ခွေးအတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် ။ အိုး၊သင်သည်မော်ဒယ်လ်။ သင်ထင်ကိုယ်စားပြုအားလုံးသည်အမေရိကန်? သင်ကြိုဆိုပါတယ်။ အိုးမြော်လင့်လျက်၊ငါအလျှင်းပြုပါရန်ဒီနှင့်အတူ ရုပ္ထု။ သင်ဒါတွေကိုဘာမှလုပ်ရန်မလိုလို။ ကျွန်တော်တွေ့အမေရိကန်နဲ့သူ့ကိုမေးကြပါပြီမင်း။ မကြားခဲ့သည်။ ခင်ဗျားကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြော။ လ။ -)ကျနော်တွေ့အမေရိကန်ကောင်လေးနဲ့သူ့ကိုမေးသင်။ မကြားခဲ့သည်။ သင်ကြိုဆိုပါတယ်၊အင္သည္။ ငါကလည်း။ နားအမျိုးသားများအတွက်ပိတ်မိပပါ မထားဘဲအလယ်ခေတ်ပန်းချီဟင်(လသ)လှုံဆော်အားထိတ်လန့်စခန္း၏လက်အောက်တွင်-မုတ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူနာမည်ကြီးတွေ
ငါ့ခွေးနှင့်နံနက်ဂိမ်းအဘို့အသွားမှာအများဆုံးအမှုအရာ။ ငါမှဝီကီအတွက်။ ။ ငါအနားယူနှင့်ပျော်မွေ့ဘဲလျက်အသွားမှာဥယျာဉ်။ ဒီမှာမျှော်လင့်။ ငါခရီးသွားလာကြိုက်လားနှင့်ဖြစ်နိုင်ငါ၏ဘိုးဘေးဘီပိုလန်ကနေ။ ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့။ ငါအရွယ်ရောက်သားသမီး။ ငါကြိုက်ဖတ်စာအုပ်များ၊ဟင်းချက်၊လျှောက်လှမ်းခြင်း၊ခရီးသွားလာ၊ကြောင်။ ငါသည်အရပ်တည်ချက်အပေါ်ကောင်းစွာအကြှနျုပျ၏ခွကေိုနှင့်အလွန်လွတ်လပ်သော။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအလွန်ရိုးသား၊ပွင့်လင်းလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြိုက်ဘူး၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်လိုပဲလိင်တာပါကြက်သွန်ဖြူ။ အသက်အရွယ်၏အလုပ်လုပ်အဖြစ် ၊ကျွန်မဟာအားကစားစိတ်၊ကိုယ့်ကစား ၊ငါ့မိသားစုအတွက်အသက်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာအတွက်ပဲရစ်အတွက်။ ငါ၏ပြည်၌မင္ဒါငါအသေးစား၊အလုပ်ကွက်ငါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူငါရှိသည်နိုင်ကြောင်းအမှန်တကယ်ကိစ္စသူတစ်ဦးမှအာရုံစိုက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြင်နာရက်ရောသူတစ်ဦးမှတတ်နိုင်လိမ့်မည်ငါ့ကိုအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည်ဟုငါသည်အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်တကယ်ကြင်နာစိတ်ရင်းမှန်တဲ့သူဖြစ်တယ်
ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဘယ်သို့ပြုရမည်နှင့်အဘယ်သို့မထုတ်ပိုးပန်း၏။ အဘယျသို့ဖြစ်စေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားချစ်တဦးတည်းအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နိုင်အလွယ်တကူအဖြစ်ရှုမြင်ဝါအတွက်အခြား။ မှာထိုနေ့၏အဆုံး၊ဒါကြောင့်ဆင်းဖို့လာဘာတစ်ဦးချင်းစီကိုမြင်သင့်လျော်သောအဖြစ်(ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ)၊ဒါပေမယ့်မနာပါဘူးသင်ယူဖို့နည်းနည်း အကြောင်းယဉ်ကျေးမှု၏လူတစ်ဦးသင်ဖန်စီ။ လူကပြင်သစ်မိန်းကလေး၊ဒီနေရာမှာအချို့အထောကျအကူအကြံပေးချက်များ။ ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်မိန်းကလေးဖြစ်၏တစ်ဦးဝီကီအလားတူအပြောင်းအလဲ၊ဆိုလိုတာကအများအပြားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုရေးသားနေကြသည်စွယ်စုံကျမ်း။ ဖန်တီးရန်၊ဤဆောင်းပါးနာ့စာရေးဆရာများလုပ်ကိုင်ဖို့အပြင်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအချိန်ကျော်။ ဤဆောင်းပါးအစအရှု၊အကြိမ်။ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဘယ်သို့ပြုရမည်နှင့်အဘယ်သို့မထုတ်ပိုးပန်း၏။ အဘယျသို့ဖြစ်စေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားချစ်တဦးတည်းအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နိုင်အလွယ်တကူအဖြစ်ရှုမြင်ဝါအတွက်အခြား။ မှာထိုနေ့၏အဆုံး၊ဒါကြောင့်ဆင်းဖို့လာဘာတစ်ဦးချင်းစီကိုမြင်သင့်လျော်သောအဖြစ်(ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ)၊ဒါပေမယ့်မနာပါဘူးသင်ယူဖို့အကြောင်းနည်းနည်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုလူတစ်ဦးသင်ဖန်စီ။ လူကပြင်သစ်မိန်းကလေး၊ဒီနေရာမှာအချို့အထောကျအကူအကြံပေးချက်များ။ မဟုတ်ပါဘူးရင်တောင်၊သင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်အဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဒါဟုခေါ်’အရုပ်ဆိုးအမေရိကန်’ဖြစ်လျက်ရှိ ၊စောသောကြောင့်အမှုအရာအမျိုးမျိုးမှနေအိမ်၊နှင့်လည်းအမှတ်မထင်။ ဝတ်စုံအနည်းငယ်ပိုကောင်းသထက် ပုံမှန်အတိုင်း။ ပေါ့ပေါ့စားဆင်ယင်(အားကစားဖိနပ်၊ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်၊ချွေး၊တီရှပ်၊ဂျင်း၊သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီ)အဖြစ်ဘုံမဟုတ်။ ပြင်သစ်မိန်းကလေးကဲ့သို့သင်တို့ဖြစ်နိုင်မဝတ်ဆင်လိုသူသည်အိပ်ရာထဲကအလှိမ့်သို့မဟုတ်နောက်ကျောကနေရရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်သငျ့သကိုမျှမပြု။ မကြွား၊ုိင္တာ၊ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ငြင်းခုံ၏အပေါင်းအဘော်နှင့်အတူ၊သို့မဟုတ်ဘာမှမလုပ်ဆွဲရန်အာရုံစိုက်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းသင်မမြင်နိုင်ပါဘူး၊အခြားအင်္ဂလိပ်လူမျိုး။ ပြင်သစ်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်သည်းခံ။ ရှိပါကသင်ရှေးရိုးစွဲနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးအမြင်၊နားလည်ကြောင်းဤပြင်သစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖွယ်ရှိရှိသည်ဖို့ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ရှုထောင့်။ သို့ရတဲ့အငြင်းအခုံကျော်လမ်းကိုအမှုအရာ’သင့်’ဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သတ်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာရက်စွဲအမျိုးသမီးရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာအတ္တလန္တိတ်လေ့လာသောအမျိုးသမီးအချို့ယဉ်ကျေးမှုများ(အထူးသဖြင့်အမေရိကန်)အပိုသဘောတူထားသော’ချဉ်းကပ်ချိန်းတွေ့ဖို့အတွက်၊ဒါကသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုသိရန်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်၏အဆိုပါဆက်ဆံရေး၊ဘယ်မှာသွား၊စသည်တို့ကို။ သင်ရှာဖွေသောပြင်သစ်အမ အဖြစ်အများကြီးအလျင်အမြန်ဖွင့်ဆိုရန်ဆက်ဆံရေးနှင့်အမည်ပေးထးနှင့် ထက်သင်အသုံးပြုကြသည်။ လျှင်ဤသည်အမႉအံ့၊ထိုသို့ကူညီစေခြင်းငှါဖတ်ရန်တစ်ဦးစာအုပ်၏ရေးသားသူဘယ်လိုအကြောင်းပြင်သစ်အမျိုးသမီးရက်စွဲအကြောင်းလေ့လာသူတို့နှစ်သက်သိရန်ရတဲ့လူမှာညစာစားပွဲပါတီနှင့်ယူပြီးအားဖြင့်လူတန်းစား၊အစားထက်တစ်ဦးအပေါ်တရားဝင်နေ့စွဲအရာနဲ့တူပိုပြီးခံစားရမယ့်အလုပ်အင်တာဗျူး။
အမေရိကန်အတွက်၊ငါတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော်တို့ချစ်မြတ်နိုး- နှင့်ပျော်ရွှင်စွာ-အစဉ်အဆက်ပြီးနောက်။ အလိုက်ပျော်ရွှင်မှု၏ကျမ်းစာသို့ငါတို့၏လွတ်လပ်မှု၏လိုက်စားအပျော်အဆုံးသတ်သည်ကျမ်းစာထဲသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး ။ ဒါပေမယ့်လာသောအခါစစ်မှန်သော-ဘဝ၊အမွတ္-သိပ္လည္းဆက်ဆံရေး၊ကျနော်တို့တကယ်တက်ထားအဘို့အကိုအကောင်းဆုံးအောင်မြင်။ ကျနော်တို့မကြာခဏရွှေ့သွားမှကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနှင့်အထောက်အပံ့စနစ်၊နှင့်အတူစွဲလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်နှင့်ပတ်သက်။စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုသည်ဒီပြီးပြည့်စုံရုပ်ပုံလွှာသောငါတို့ချစ်-။ ပြင်သစ်ယေဘုယျအနေဖြင့်၊အလှည့်အားဖြင့်ပယ်ပြီးပြည့်စုံအောင်တော်အဖြစ်ရှုမြင်သည်သူတို့စွာကြိုဆိုစတိုင်နှင့်အလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၊အဖြစ်ထင်ရှား၏သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်။ နှင့်သော်လည်းမေတ္တာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်၊အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေလူမျိုးသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုခံစားရတယ်၊ အမြင်ပြီးယုံကြည်ချက်အကြောင်းဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ညီ။ တိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ခဲ့သောပြီးအဆိုပါမြို့များ၏မေတ္တာ၊ကိုယ်မှတ်သားထိုက်သည်အရှုထောင့်အကြောင်းဆက်ဆံရေးမှတိကျသောဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်နှင့်မည်သို့သူတို့ယုံကြည်သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်အတွက်၊ကျွန်တော်မကြာခဏရှိသည်သောလူတစ်ဦး၊ငါတို့သည်ချိန်းတွေ့ကြရမည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ။ တင်းနစ်အားဖြင့်နှစ်ပတ်လည်အပေါ်ပို့စ်များ (။၊မင်္ဂလာနှစ်နှစ်အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ။ နှလုံးဂျိ -မ်က္ႏွာဂျိ*။)သဲလွန်စသင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်သော အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးချစ်ကြည်။ ငါကိုယ်တိုင်၊ကြောင်းကိုယုံကြည်သူအတွက်တစ်ဖက်ကနှစ်ဆအဖြစ်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်တို့သည်ဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူဤပုဂ္ဂိုလ်၊မသတီကသူလူတစ်ဦးသင်အတူရယ်မောနှင့်အဆုံးပြောပြမှအရာအားလုံးကို၊အကြိုက်အရာအားလုံးကိုသင်ကြိုက်၊နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အရုံတစ်မိတ်ဆွေကောင်း။ လာျတီဘဝအလဲနဲ့သုံးလိုက်ရင်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကြီးလျော့နည်းသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေထက်။ သို့သော်ပြင်သစ်ဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အဘို့အစောင့်ရှောက်ဘဝလက်တွဲဖော်နှင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများသီးခြားလူများ။ေတယောက်ကို၊သူတို့မသိကြောင်းနက်နဲသောအရာဖြစ်တဲ့ကောင်းသောအရာတစုံတခုသည်။ သူတို့မှသွားအတူရေချိုးခန်းတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူတို့မခံစားရဘူးလိုပြောပြဖို့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံး(သင်တန်း၏၊ဒီအထက်ကွဲပြားခြားနားသည်စောင့်လျှို့ဝှက်ချက်များဘယ်တော့မှမဖြစ်၊အဆင်ပြေ၊အပင်အတွက်ပြင်သစ်လူ့ခေတ်သစ်ဆက်ဆံရေး)။ သူတို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အတူတူ၊နှင့်ရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်အနည်းဆုံးအချို့အခြားအကျိုးစီးပွား၊မိတ်ဆွေတွေကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ ဒီတသံမပြုစေခြင်းငှါလည်းလေးနက်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်-တိကျတဲ့ငါသေချာပါတယ်သင်၏အမေနှင့်ကုထုံးပြောပြခဲ့ကြဒီကတည်းကသင်အပးႏိုင္ေ။ ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်အမျိုးသမီးများမှာတော့ကောင်းမှာပါ။ သူတို့ဘယ်တော့မှအပင်မြင်ယောင်ကြည့်ရှာဖွေဆောင်၌ယောက်ျားတစ်ဦးဆက်ဆံရေး။ သူတို့ကသေချာအောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ပြီးတော့လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေအလာအဘို့မိမိတို့ခရီးကို၊မဟုတ်အသစ်အသက်လိုအပ်သူတို့အရှုံးမပေးဖို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်၏အသက်တာ။ ကိုသာမကပြင်သစ်ထိန်းသိမ်းသူတို့၏လွတ်လပ်ရေးအခါသူတို့ဆက်ဆံရေးအတွက်၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့အစဉ်မပြတ်သေချာအောင်သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သိတယ်သူတို့အလွန်အမင်းယုံကြည်မှု သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်(ပင်မ)။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲသို့မဟုတ်ဆယ်နှစ်ထောင်၊ပြင်သစ်အမျိုးသမီးများမတိုင်ကြားဖို့သူတို့ရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာဗိုက်အဆီ၊ကာလဖောင်း၊သို့မဟုတ်အသက်ဘယ်လောက်သူတို့အတွေးသူတို့ကြည့်ရှု။ အကြင်(အသနားခံစာ)ပမာဏ၏အစောကလိုအပ်သည်များမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများစပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်ခွက်ကျော်။ သူတို့ယုံကြည်သောအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကိုသင်ပြောပြပြီးပါနဲပြန်လည်တင့်တယ်၊လူငယ်တို့၊လက်၊စသည်တို့ကို။၊ ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့သင်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ဒီအသင်သည်အဘယ်သို့သင်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်၊အထွေထွေ၊တည်ဆောက်အတွက်ငါတို့၏အဆုံးအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး- အပုံ-ပြီးပြည့်စုံသောမင်္ဂလာဆောင်။ ငါပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှမ တဆင့်နောက်ဆုံးတွင်အပြေးသတို့သမီးသို့မဟုတ်အငယ်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းတောင်မှတဦးတည်းအတွက်၊သူတို့ကအချိန်သို့ဖြတ်စီးသောနေဝင်ချိန်မြင်းကဲ့သို့အ ရခ်ိဳးျအားလုံးအချိန်၊နှင့်အခြားသူအရွက်၊သူမ၏ဖခင်နှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်ဖို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမသည်ဘယ်တော့မှအမှန်တကယ်ပြောဖို့(ငါသည်အမီအငိုက်တွင်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်-အဆုံးသတ်ရေး)။ ကျနော်တို့အားလုံးကိုလိုချင်သည်ယုံကြည်ဖို့ ကိုမင်္ဂလာဆောင်အလျောက်အဆောင်မှပျော်ရွှင်စွာအစဉ်အဆက်ပြီးနောက်။ ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးအရာကိုသိရန်ဖြစ်ပျက်သောနေ့ရက်နှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ကြောင့်ကျနော်တို့ယူဆ၊သူတို့အတွက်မေတ္တာသည်အစဉ်အမြဲအရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသော။ ့သေ၊ရှိခြေထောက်၊သူတို့ကလက်ထပ်တွင်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်လှေခြားအဘယ်အရာမှားယွင်းနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လျှင်ပင်ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုရောင်းချကြသည်အပေါ်နတ်သမီးပုံပြင်၊နက်ရှိုင်းသောဆင်းကျနော်တို့ပိုကောင်းကိုသိရ။ သိထောင်ကြာအလုပ်ကြိုးစားပြီးစိတ်ရှည်ပြီးသူတို့၏အဆုံးမှာကွာရှင်း။ နှင့်နေဆဲကျနော်တို့ဝယ်သို့သောမင်္ဂလာဆောင်၏အဆုံးနတ်သမီးပုံပြင်။ သို့သော်ပြင်သစ်သိအဝင်နတ်သမီးပုံပြင်အပေါ်အများကြီးကြာကြာထက်ပြီးနောက်မင်္ဂလာဆောင်ခေါင်းလောင်းထိုးပြီအူ၊ဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ခေါင်းလောင်းဟုတ်တီမှာအားလုံးလိုအပ်။ အထွေထွေအတွက်၊လူများအတွက်။ အမေရိကန်၊မင်္ဂလာဆောင်အဖြစ်ရှုမြင်သည်သဘာဝလာမည့်ခြေလှမ်းအတွက်ဆက်ဆံရေးရှိရာကျူးလွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတူတကွသင်၏အသက်နှင့်ထိုကြောင့်ဖြစ်ချင်ဘာသာရေးနှင့်ဥပဒေချည်နှောင်။ ပြင်သစ်တွင်၊ဘာသာကျဆင်းနေအတွက်၊ထို့ကြောင့်လျော့နည်းလူမြင်ရန်လိုအပ် ေဘာသာရေးအနှောင်။ အဲလည်းတစ်မြင့်တက်လာအတွဲ၊သောနည်းလမ်းများအတွက်လျော့နည်းတရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်။ ပြင်သစ်ယုံကြည်တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်သည်မဟုတ်အရာအားလုံးကြောင့်ဖြစ်တက်အက်ကွဲအမေရိကန်အတွက်၊ဒါကြောင့်စဉ်းစားရန်တဦးတည်းဖြစ်ရမှအများအပြားခြေလှမ်းများအတွက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းစုံတွဲတစ်တွဲအမည်သို့မဟုတ်မယူစေခြင်းငှါ၊ပိုပြီးဒါကြောင့်ထက်ပိုပျော်ရွှင်သောအဆုံးသတ်ရေး။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊အခါစုံတွဲတစ်တွဲမ၊လက်ထပ်သူတို့မယူဆပါဘူးမင်္ဂလာကိုခံရသူတို့ပျော်ရွှင်စွာအစဉ်အဆက်ပြီးနောက်။ သူတို့ဘယ်တော့မှရပ်တန့်အတွက်ချပြီးအလုပ်ကြိုးစားစောင့်ရှောက်ဖို့အချစ်ဇာတ်လမ်းအသက်ရှင်၊အိမ်ထောင်သက်သို့မဟုတ်မ၊သူတို့လက်ထပ်ရန်အဘို့အလိုငှါတစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်အဆုံးသတ်ခြင်း။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်နိုင်ငံပါဝင်သောမြို့၏အချစ်ခံရဖို့အများဆုံးအပံများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၊ဒါပေမဲ့၊ကဆက်ဆံရေးကိုကြွလာသောအခါ၊သူတို့ကအမှန်တကယ်အလွန်လက်တွေ့ကျတယ်။ ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လိပ်အများဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်အချစ် ကမ္ဘာ၏၊သို့သော်သူတို့တတ်နိုင်င့်မေတ္တာ၌လဲကျဖို့ပြီးအလွန်ယုတ္တိ။ နေစဉ်အမေရိကန်တွေအ ကိုယ္တိုင္က်၊သူကငါ့ကိုမချစ်တော်မူ၊သူကငါ့ကိုမချစ်တော်မူ၏နေစဉ်ကောက်ချပ်၏ပယ်ပန်းပွင့်၊ ပြင်သစ်ပြောနေကြသည်။ ဒီဖြစ်ကောင်းအနှစ်သက်ဆုံးလမ်းအကြောင်းကိုပြင်သစ်သင်ပေးစဉ်းစားရန်မေတ္တာအကြောင်းမှတစ်ဦးအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မအ များ၏အသက်သို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံငြင်းပယ်၊ဒါပေမယ့်အကွာအဝေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်။ အမေရိကန်တွေအမြဲတမ်းရှာကြံလည်းကောင်းပျော်ရွှင်နောက်ဆုံးတွင်သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းပိတ္သိမ္းဆက်ဆံရေးမှ၊ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးအရာရှိနှင့်အကွာအဝေး၏ဆက်ဆံရေးရလဒ်များကိုမှပျမ်းမျှအသည်းအသန်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တကယ်ရက်စွဲအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားပါ။ တကယ်တော့၊သူတို့မပင်ရှိသည်စကားလုံးမှာပြင်သစ်ဘာသာစကားနေ့စွဲများအတွက်။ အနီးဆုံးညီမျှဖြစ်မည်ဟုဆုံရာလည်းဖော်ပြရန်ဘာမှဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့့်ခန့်ကိုသိမ်းပိုက်ကုလသဖးမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ဆုံ (တစ်ဦးရင်ခုန်စရာရင်ဆိုင်)အဟောင်း၊အနည်းငယ်လွန်းပြင်းထန်သော၊နှင့်မရှိသလောက်ကိုအသုံးပြုသည်။ လူတွေ့ဆုံရန်အလားအလာမိတ်ဖက်များအတွက်အုပ်စုနှင့်ဆက်လုပ်၊အထက်မှာတစ်ယောက်ညစာစားပွဲ။ ပင်ကြွလာသောအခါအချိန်ဖြုန်းဖို့တစ်ယောက်၊သူတို့ကအဘို့ဘေးဖယ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ် အပဘာမှလည်းအဆင်မပြေပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအတွေ့အကြုံအားလုံးသိကောင်းစွာ၊အရာနဲ့တူပိုပြီးခံစားရမယ့်အဆင်မပြေလုပ်အင်တာဗျူးထက်အစည်းအဝေးအလားအလာရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်။ တခါဒီချိန်းတွေ့ဖြစ်ပေါ်၊ဒါကြောင့်တော်တော်များများယူဆခံရဖို့သီးသန့်လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမရှိသည်ဖို့အပြောကြောင့်သီးသန့်ဖြစ်သွယ်ဝိုက်။ တစ်ယောက်ကအလေးအနက်အဆင့်။ ကမယုံသို့မဟုတ်မ၊ဒါကြောင့်လူကြိုက်များပြင်သစ်တွင်မှပို့စ် ရဲ့အကြောင်းဇင်း သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်အပေါ် ဖို့ကြကုန်အံ့၊မိတ်ဆွေဘယ်လိုသိတော်မူ၏။ တကယ်တော့၊အများအပြားစုံတွဲများတိပညာရှိပင်အတွက်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအုပ်စုနှင့်မမြဲချင်မှပေါ်လာအဖြစ်တရားဝင်မောင်ချက်ချင်း။ လျှို့ဝှက်အမတ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေး၊စုံတွဲတစ်တွဲကိုမကြာခဏဖွင့်ဆိုဆက်ဆံရေးအပေါ်အခြေခံပြီးရင်းနှီးသောသူတို့သည်စောင့်နှစ်ဦးအကြား၏။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး(မေတ္တာ)အဖြစ်ယူဆလုံးဝ။ ငါတို့ချစ်သောမင်္ဂလာဆောင်ကြေညာချက်များအတွက်သတင်းစာထိုက်စျေးမှအင်္ဂလိပ်၊မင်္ဂလာဆောင်ကြောင်းရေးသားသာသတင္းမရသာ မည်အနွယ်သို့မဟုတ်အဆိုပါထိပ်တန်းနာမည်ကြီးတွေ၊နေ့စဉ်လူတွေဘာကြောင့်သင်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်း၊အများကြီးလျော့နည်းအစိမ်း၊အသိသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ရင်းနှီးသောအသေးစိတ်။ ေပြီထူးပြော့စာအုပ်ဖြစ်ဘယ်လိုထောင်(အဘယ်သို့ငါအမှန်တကယ်ကနေလေ့လာသင်ယူအမျိုးသမီးငါးခုတိုက်ကြီးပေါ်မှာအကြောင်းကျန်ရစ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကယ့်ကိုအခက်နှစ်ထောင်)၊သူမအင်တာဗျူးပြင်သစ်အမျိုးသမီးဘယ်သူကပြောပါတယ်၊ထိုသို့အလုပ်ရဲ့။ သူနေဆဲလိုအပ်ချက်များကိုအောင်နိုင်မှငါ့ကိုနေ့တိုင်းလိုအပ်သည်သူ့ကိုချင်ငါ့ကိုနေ့တိုင်း။ ငါထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ဒီမှာဘယ်အရေးကြီးပါသည်င်:ငါသည်ကျင့်ချင်သောအလုပ်။ ဒီအနှစ်သက်ဆုံးအတွေးအပေါ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံပင်အကောင်းဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီး။ သို့သော်ရုံသာမကလုပ်ငန်းအတွက်သာမန်အမှုအရာကဲ့သို့အလျှော့ပေးလိုက်လျောသောကြောင့်အလုပ်လိုအပ်သည်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလုပ်မှအမေလိုက်၊မီးပွားချရန်အလိုဆန္ဒ၊နှင့်အစဉ်အမြဲမေတ္တာ၌ကျသွား။ အခြားအမျိုးသမီးကရှင်းပြသည်၊»အခါညစာစားရန်ထွက်သွား၊ချမင်းဖုန်းမပြောပါနဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်အဝတ်လျှော်သို့မဟုတ်အကျိုးအိမ္သာ။ မရတဲ့လူအကြောင်းပြောဆိုသည့်အကျိုးအိမ္သာ မိမိအမြှောင်? အခြားစကားများတွင်၊သူတို့ဦးစားပေးသည်အသက်ရှင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။»မကောက်သေးတိုက်ပွဲတွေလည်းမတတ်ဘူးသေးငယ်တဲ့အမှုအရာ။ နှင့်အထက်အခြား၊စေဘယ်တော့မှငြီးငွေ့စ။»သူတို့သတိရှိရှိကုန်သွယ်ရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စွာအစဉ်အဆက်ပြီးနောက်အသက်ပန်ကတိကဝတ်များအတွက်အလုပ်လုပ်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူလူတစ်ဦးသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတစ်ဦးတစ်သက်တာဖြုန်းဖို့။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းအရာကိုအမှန်တကယ်ချစ်သည်။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳစကားပြောပြင်သစ်များ၏စာရင်းချက်တင်နာရီအဖွဲ့ဝင်များသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်။ အောက်ဖော်ပြပါစကားပြောနာရီအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အသက်ရှင်သူ။ စကားပြောနှင့်အတူ၊သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးနှိပ်ပါင်းတို့၏။ အများအပြားနှင့်မတူဘဲအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ချက်တင်အပေါ်စကားပြောနာရီကပျော်စရာများနှင့်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဤသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုချက်တင်ကနေလူတို့နှင့်အတူ။ ဖို့အခမဲ့ခံစားရပတ္သက္လုိချက်တင်နာရီနဲ့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများမှ။ ယခု၊သင်ရှာနေကြသည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြင်သစ်ထံမှ။ လှောနိုင်တယ်စကားပြောနာရီအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခြားတည်နေရာအားဖြင့်စကားပြောနှင့်အတူအခြားစကားပြောနာရီအဖွဲ့ဝင်များအသက်ရှင်သူအနီးျပင္သစ္၊သင်သုံးနိုင်သည်အောက်ပါလင့်များကိုရာက္ၾ ။ ကိုနှိပ်ပါလင့်ခ်နှင့်စကားပြောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူနေထိုင်နေအနီးပြင်သစ်။ လို့မရပါကချက်တင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအခန်း၊
ထောင်ရေးအေဂျင် ။ ဖန္တီးျခင္းအနက်ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမိန်းကလေးများမှအွန်လိုင်း
ချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများကနေယူကရိန်းအလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းအဘို့အရွေးတည်ထောင်တစ်ဦးအားကြီးသောနှင့်မေတ္တာရှင်မိသားစုကိုအဘို့များစွာသောလူတို့စိုက်ပျိုးကြသူတစ်ဦးသတိပြုမိရန်စွမ်းနိုင်ခြင်းအတွေ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ကို၊နှင့်အလားတူအသက်တန်ဖိုးများနှင့်အစီအစဉ်၊သူတို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်း။ ပထမဦးဆုံးမှာကောင်းပုံရတယ်၊နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအသင်တို့အချင်းချင်းသိရန်၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေး၊နှင့်ကြီးထွားလာ။ သို့သော်၊တစ်ချိန်တွင်ကြွလာသောအခါသင်သေချာပါစေချင်ပါလိမ့်မယ်ခဲ့သည့်တန်ပြန်ဖို့တစ်ဘုံအမြင်အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြရန်အလင်း-စိတ်တူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်၊အမျိုးသားများအတွက်အများဆုံးမကြာခဏအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တည်ငြိမ်ကြည့်ရှုများအတွက်တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်။ ဒါကြောင့်၊သင်ချိန်းတွေ့နေသောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်ချင်တဲ့တည်ထောင်ရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ၊မီကပင်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစည်းအဝေး။ များစွာသောလူဆိုဖြစ်နိုင်ပေမယ့်။ ကျနော်တို့အထဲကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေဘယ်လောက်အကွာအဝေးဆက်ဆံရေးကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအနက်နှင့် ရှည်-ရေရှည်တည်တံ့။ မကြာသေးမီသုတေသနတွေ့ရှိပြပြီသောခရီးဝေးဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းများစွာအတွက်အကောင်းထက်အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စုံတွဲများအတူတကွနေထိုင်သို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့အသီးအသီးအခြား။ ဒီအစိတ်အပိုင်းအတွက်အားဖြင့်ရှင်းပြစိတ်ခံစားမှုရင်းနှီးမိတ်ဖက်များအကြား-အခါမပွေ့သို့မဟုတ်ဖင္သင်၏ချစ်သမီး၊သင်စတင်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီးအပျော်အဖြစ်သူမ၏လက်ကိုကိုင်ပေးခြင်း၊သူမ၏အလင်းအနမ်းနဲ့ရိုးရိုးသို့ကြည့်မျှော်သူမ၏မျက်စိနှင့်မြင်သူမ၏အၿပံဳး။ ခရီးဝေးဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်လေ့မျှဝေဖို့အများကြီးပိုနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ စဉ်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းဖြင့်လူအများအပြားအိမ်ထောင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မှသူတို့ကိုပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေး။ သင်၏သတို့သမီး၊တူများစွာသောအခြား၊အချိန်အများကြီးဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ရတဲ့ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပိုကောင်းသိ-အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲခါးကအသံ၊သင်အမှန်တကယ်ပြီဘာမှလုပ်မီသင်တွေ့ဆုံရန်လူတစ်ဦးအတွက်။ ထို့ကြောင့်၊ဒီအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေကြောင်းပိုထွက်၏ချစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပြသသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အဆင်သင့်သောအလင်း။ ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါအဘယ်ကြောင့်သင်စဉ်းစား သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်-စေခြင်းငှါလမ်းညွှန်အားဖြင့်အမေရိကန်မှိုင်း၏ဆက်ဆံရေးကို၊ကိုအလေးပေးသောလိုအပ်ခံရဖို့အတူတကွရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မရမြင့်မားတန်ဖိုးအပေါ်မကြာခဏမျက်နှာအဆက်အသွယ်။ ရှင်းနေသည်မှာ၊အကွာအဝေးဆက်ဆံရေးကိုင့္သည္မ်ားကိုဤတန်ဖိုးများ၊သို့သော်ဤစကားမှန်သည်မိန်းကလေးများသည်။ ကျိန်းသေမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးတွင်ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းအများအပြားဆက်ဆံရေးအသုံးပြုခံရဖို့ဖွဲ့စည်းမှာကျောင်းသို့မဟုတ်အတွင်းကောလိပ်များ၊အရာပြီးနောက်လူငယ်အမျိုးသားများထံသို့အစေခံရန်-နှစ်အတွက်စစ်တပ်များ၊နှင့်အမျိုးသမီးစောင့်ကြည့်များအတွက်သူတို့ကိုမှီတိုငျအောငျပြီးစီးခဲ့။ ပြီးနောက်၊အဆိုပါစုံတွဲသည်များသောအားဖြင့်လက်ထပ်ခဲ့သောစဉ်းစားအလွန်ချစ်ခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအမျိုးသမီးရဲ့သစ္စာ။ အဆိုပါစွမ်းရည်ကိုအဘို့အစောင့်ဆိုင်းချစ်သောသူနှင့်အဖြစ်သစ္စာရှိဖို့သူ့ကိုဤသို့အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ၏တစ်ဦးဗစ်ယဉ်ကျေးမှု၊ဒါကြောင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချ၏အမျိုးသမီးရဲ့လေးနက်အတွက်ခရီးဝေးဆက်ဆံရေး။ လျှင်ပင်၊သင်ဆဲသံသယရှိကြောင်းလေးနက်၏ဆက်ဆံရေးကိုလုံးပြီးနောက်ဤအဆင့်များ-ကိုယ့်ကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လူဝင်တစ်ဦးမှစွမ်းရည်ကိုအောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုသောအခါ၌ပင်သူတို့ပျက်ကွက်။ ဒီအရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၊ကွောငျးကိုခံစားရလျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှု-သင်ကျိန်းသေအတွက်အခိုင်နှင့်တည်ငြိမ်နှောင်ကြိုးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဗမာမိန်းကလေး။
ငါနားလည်သူတို့ကိုလက်ခံ။ ငါသည်လည်းသဘောတူမှလက်ခံရရှိအီးမေးလ်သတင်းလွှာ၊အကောင့်အသစ္မ်ား၊အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမှအခြားပရိုဖိုင်း၊စေလွှတ်သဖြင့်ပြင်သစ်-။ လှပတဲ့ဒီဇိုင်းအဖြစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအတူသင်တို့ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးမမေ့နိုင်သော လေထုအဘို့အစကားပြောခြင်း၊စကားပြောဆို၊နှင့်အသိအကျွမ်း။ ထို့အပြင်၊အွန်လိုင်းဆိုက်နည်းပညာ၏အသက်တာဖြစ်စေမည်အများကြီးပိုသက်သာပြီးလွယ်ကူ။ ဒီပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုသည်စုံလင်သောနေရာအတွက်အွန်လိုင်းရက်စွဲများကြောင့်လူမျိုးစုကြီးစွာသောအရေအတွက်ကိုတော်တော်လူပျိုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေရှာနေအတွက်သူတို့ရဲ့အထူးအသူမြား။ အပြင်၊အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကိုတိုးပွါး။ ထို့ကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမှာမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်မျှတွေ့မြင်လျှင်၊သင်သည်စိတ်ပျက်စရာရှာတွေ့ဖို့သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်၊မအပူတပြင်းခံစားရ၊ကျနော်တို့ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သင်သည်သင်၏စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ တက်ဖြည့်စွက်သမုဒ္ဒရာ၏အထီးကျန်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ပြီးစိတ်ရင်းမှန်တယ္။ အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ခေတ်သစ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆက်သွယ်ရေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်သင်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေ။ ထို့အပြင်၊သင်စီစဉ်ရှာပုံတော်ရွေးချယ်ခြင်းအချို့ဒေသ၊မြို့၊အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ဝါသနာ။ သင်ရှာတွေ့မှတတ်နိုင်သမျှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြင်သစ်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ။ အများအပြားရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားသူတွေချင်ချက်တင်၊ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၊ပရောပနှင့်ရက်စွဲကိုအတူအဘယ်ကြောင့်မ လက်လွတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေအကျွမ်းနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုတည်းယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးမှစ။ ဒါကြောင့်၊ရာက္ၾပြခန်းနှင့်ရှာဖွေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်စိတ်ရင်းမှန်။ အကယ်စင်စစ်၊သငျသညျတွေ့ရှလိမ့်မည်သူတစ်ဦးသင်၏နှလုံးဖွင့်လှစ်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုအားလုံးသင့်ရဲ့ခံစားချက်အလိုဆန္ဒနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ဒုက္ခဆင်းရဲ။ ပူးပေါင်းပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ရှိသည်ပျော်စရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အနေဖြင့်ဆိုက်ဘာကမ္ဘာ။ ၏အားသာချက်ကိုယူကအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊အလုပ်အသစ်အသိအကျွမ်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ချစ်ကြည်လက်ျာဘက်ကဒီမှာရှိတယ်အတွက်အနည်းငယ်မျှနှိပ်။ ကိုယ့်ကြိုးစားထိုကဲ့သို့သောလွယ်ကူသော။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာများအတွက်လုံခြုံပြီးကာကွယ်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကရောနှင့်အတူလူတစ်ဦးကဲ့သို့သင်မှန်ယခု-သူသိတယ်။ သတိရဤအနည်းငယ်သာပျက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးသိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းသင်၏အသက်တာသို့လှည့်။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်း:သင်ကသင့်ရဲ့ကြော်ငြာဖန်တီး၊ထို့နောက်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်အချစ်မျိုးဆက်သို။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အသီးရှာနေသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အမှန်ချစ်သူ၏အသက်တာ၏၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးက၊ချိန်းတွေ့၊သှေးဆောငျသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့၊ဤသည်ဆိုက်ကိုသင်တို့အဘို့။ ထိုမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်ဤချိန်းတွေ့ တကယ်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်သင်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှမများ။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မထည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဒါကြောင့်သင်ပြန်လာမကြာခဏနှင့်အတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အတွေ့အသက်ဝိညာဉ်-ညီအစ်မ၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူမျှဝေဖို့အသက်အားဖြင့်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအလုပ်အစည်းအဝေးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများဦးဆောင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးမှရေရှည်တည်တံ့သော၊သဟဇာတဖြစ်သော၊မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံဆက်ဆံရေး၊သို့မဟုတ်တောင်မှမင်္ဂလာဆောင်။ မှာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျနော်တို့ယူတိုင်ကြားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလွန်အလေးအနက်။ အပင်ပိုပြီးထိရောက်၊ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီတိုင်ကြားခင္းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ’မွတ္ခ်က္မ်ားဖြစ်ကြောင်းအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူတို့အထောက်အကူတိုးတက်မှု၏။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်စေရန်အလေးအနက်အသိပညာအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ နှင့်အတူတစ်ဦးအားကြီးသောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကြီးထွား၊သင်ဖြစ်နိုင်တစ်ခုနှင့်အတူအဘယ်သူသင်မျှဝေနိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကို။ ထို့အပြင်၊ဒီအအလေးအနက်နှင့်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၏အားသာချက်ရှိပါတယ်ရာပူဇော်သက္ကာကို၎င်းမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုမှဤသူအပေါင်းတို့သည်အဖွဲ့ဝင်များ။ ဆွဲနိုင်ရန်အတွက်အာရုံစိုက်ဖို့အသင့်ပရိုဖိုင်းကို၊သင်ပင်စံချိန်တင်အသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ္ျ။ ငါတို့သည်ပူဇော်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့၊ခတ်၊တိုးချဲ့ရှာ၊ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းနှင့်အများကြီးပို။ လျှင်သင်ပုံစံမျိုးဆောက်လုပ်ဖို့ထိုက်ဆက်ဆံရေးကို၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှာဖို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူအလေးအနက်အသစ်အပေါ်လူတွေအင်တာနက်ကိုသှားသို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့ပျင်းနှင့်မွှန်းကောင်းမွန်သောဟာသနှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံက၊နှင့်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အွန်လိုင်းအတွေ့အညာဘက်ကိုယောက်ျားမိန်းမအတွက်တိရစာန်၊မိတ်ဆွေများကို၊ရည်းစား၊ချိန်းတွေ့၊မေတ္တာ။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ။ သင်ရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်းနေ့တိုင်းနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြီးမားသောနံပါတ်များ၏အနက်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လူများအတွက်ချိန်းတွေ့၊အဘယ်သူသည်အဘို့အရှာကြသည်နှင့်အဘယ်သူတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိသည်ဖြစ်သင်အင်တာနက်အပေါ်:တစ်ဦးကိုရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊လေးနက်၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်။ မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ပြင်သစ်(။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့။ ကဲ့သို့သင်တို့အလိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပြင်သစ်၊သို့မဟုတ်တစ်ဦးတစ်မျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ? အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်စကားပြောပြင်သစ်ချစ်ကြည်ရေးကလပ်အခမဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပြင်သစ်၊အမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျားပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေများအားလုံးမှ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အပေါ်ပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကလပ်ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်းကိုနှင့်သင်ချက်ချင်းရာက္ၾစာရင်းတွေ့ဆုံပြင်သစ်အပေါင်းတို့၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတွေကိုငါတို့သဆိုက်၏။ မိန်းမရှာကြံယောက်ျားများအတွက်ဆက်ဆံရေးမေတ္တာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လူရှာကြံအမျိုးသမီးများအတွက်ချစ်ကြည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ချောင်းများမှာပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ကနိုင်ငံတကာကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်ချစ်ကြည်ရေးချိန်းတွေ့အောင်တစ်ဦးတစ်ယောက်အကြားပြင်သစ်နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ပြင်သစ်ကြောင်အဆုံးစွန်သောအခမဲ့ချိန်းတွေ့အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအပေါ်အင်တာနက်နှင့်အတူဖလှယ်အပေါ်။ ကြုံတွေ့၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရေးချိန်းတွေ့အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အပေါ်ပြင်သစ်အခမဲ့။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်နှင့်အမျိုးသားများမှပဲရစ်၊عینک آفتابی زنانه ليون၊၊၊ခ်၊၊၊မြည်၊၊အယ်လ်ဆပ်၊၊၊၊ကြံ၊၊၊အကြင်ဓာတ္ျ၊တစ်စ၊။ စတင်စကားပြောအခုအခမဲ့နှင့်အရေးရုံနှင့်အတူန့်အသတ်။
ရှိတယ်ဆိုရင်မည်သည့်နိုင်ငံသားသင်ထင်မှာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်အများကြီးအကူအညီအတွက်ချိန်းတွေ့ဌာန၊ပြင်သစ်။ သောအခါကျနော်တို့၏ထင်သောအများဆုံးရင်ခုန်စရာလူလောကအတွက်၊ကျနော်တို့နီးပါးဆက်ဆက်ထင်၏။ ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကြိုက် နှင့်ပြင်သစ်ရေမွှေးကြော်ငြာကြစဉ်နေကြောင်းယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသဘာဝ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊၊အချစ်ဇာတ်လမ်းမလွှဲမရှောင် ရိုးရှင်းစွာအကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ခြေလျင်တိုင်းပြည်အတွက်။ ကျနော်တို့စိတ်ကူးအချစ်လာရန်လွယ်ကူသောအ လူနှင့်အတူသူတို့၏ကဗျာဆန်၊ညှို့ဘာသာစကားနှင့်၎င်းတို့၏အဘယ်သူမျှမပျော့သွားဖို့ချဉ်းကပ်မှုအချစ်ဇာတ်လမ်း။ ကလွယ်ကူမယ့်ပုံလှပသောပြင်သစ်စုံတွဲစိုက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျသွားကျော်တစ်ရက်ပြီးတစ်ဖန်ခွက်နှင့်အနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုအပေါ်တစ်ဦးရိုကျန်ကြွင်း၊အဖယ်မျှော်စင်မှိတ်အတွက်နောက်ခံ။ ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်အရမ်းကို အစဉ်အလာရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်သူတို့ကတကယ်တော့ အစဉ်အလာ၏မျက်နှာသာအတွက်ခေတ်သစ်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ခေါ်အင်တာနက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း။ ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပြောင်းလဲသင်ချိန်းတွေ့ဂိမ်းအတွက်။ ဒေသခံသိမ်းယူထားမှာကြည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ်ပြင်သစ်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လေ့အထများ၊အတွက်ဖြန့်ချိကလိြဳင္ေ၊အမျိုးသားနိုင်ငံ။ သာအခါ၊သာအိမ်ေထာင်စုများအတွက်နိုင်ငံခဲ့၊သားပြင်သစ်လူမျိုးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သော။ နောက်ခုနစ်နှစ်၊ဒီအရေအတွက်နှင်းဖို့အကြား။ ဤသည်အထင်ကြီးအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချို့သောအခြားနိုင်ငံများအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊နေရာသာအရြယ္ေရာက္ၿသွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်။ ၊ချိန်းတွေ့နည်းပြအတွက်၊ပဲရစ်မြို့ကြောင်းထင်နေတဲ့လူအတော်များများကိုလှည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်မကြာခဏလည်းမာနထောင်လွှားသို့မဟုတ်လွန်းအများ၏ကြောက်လန့်ပျက်ကွက်လူေတြထဲကလူ။»ဒီရက်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးအတွက်ထက်အခြားနိုင်ငံများရှိရဲ့မာနထောင်လွှားတွေအများကြီးကြောက်ရွံ့စေ၊ဒါကြောင့်ပြင်သစ်ဘူးတွေ့ဆုံရန်လူများအလွယ်တကူ၊»ပြော ဒေသခံ။»ဒါဟာမလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုကိုချဉ်းကပ်ဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်လမ္းအတွက်၊တစ်ဖီး၊သို့မဟုတ်လိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရုံသောကြောင့်၊အင်္ဂလိပ်တွေကိုအမြဲကြောက်ကြတယ်စတင်။ သူတို့ကလည်းအများကြီးရှိသည်။»ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်အောက်မှာနေသော။ မလွန်းအံ့အားသင့်မစဉ်းစားဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုကအသုံးပြုအင်တာနက်ကိုအများကြီးနှင့်အပြည့်အဝအ၏တစ်ဦးတစ်။ အတွက်-အကွာအဝေးရှိပါတယ်၊အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးကဤဆိုဒ်များပေါ်မှာ၊ဖြစ်ကောင်းကြောင့်အမျိုးသားများအလေ့အထသို့ရလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအကြာတွင်ထက်အမျိုးသမီး။ ဒါပေမဲ့ဒီကွာဟချိန်ခွင်ထွက်သက်နှင့်အတူနောက်ဆုံးမှာတော့နောက်ကြောင်းပြန်။ မာရီ ၊ကော်မရှင်၏လိြဳင္ေလေ့လာမှု၊ေျပာကလုံးဝလက်ခံပါတယ်၊လွန်းမကြာခဏမြင်ရန်တစ်လမ်းအဖြစ်လူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်»ပုံမှန်အားဖြင့်»။ သာထက်ဝက်ခန့်၏အင်တာနက်တွင်ငွေပေးချေမည်အလွယ်တကူ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်း ဖို့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု။ ကြွင်းသောသူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝန်ခံဖို့သာအနည်းငယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖွင့်အနည်းငယ်အပြေးဟာသပြင်သစ်တွင်ရှိသည်ဖို့အမည္တူရိုတူရာတစ်ခုခုဆိုလျက်:»အကြှနျုပျတို့သညျကိုပြောပြလိမ့်မယ်လူတွေကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ဆုံ ပြတိုက်။»အဖြစ်ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပိုလူကြိုက်များပြင်သစ်တွင်၊သူတို့ပြောင်းလဲလာရန်လူမှုရေးအရမတူကွဲပြားပေမယ့်လည်းပိုပြီးလျာထားသော။ သော်လည်းပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေ၍အဓိကမြို့ပြ(ပြင်သစ်နိုင်ငံ)အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပညာရှင်များ၊အသုံးပြုသူများပိုပြီးဖြစ်လာကြပါပြီကွဲပြားသောအတိတ်ဆယ်နှစ်။ သို့သော်ဤအတိအကျဆိုလိုကြောင်းလူတွေပိုပြီးချိန်းတွေ့ကြသောဖြတ်ပြီးလူမှုရေ တကယ်တော့၊ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေများကိုခွဲများနှင့်လူမှုလိုင်းများ။»ကျွန်တော်တို့မြင်တစ်ဦးအားကြီးသောကြူး၏ဆိုဒ်များပစ်မှတ်တိကျတဲ့လူဦးရေ:လူတယောက်အသက်အရွယ်၊တည်ရှိမှု၊လူမှုရေးအုပ်စုများသို့မဟုတ်ဘာသာတရား»ဟု ။»အမင္သူမ်ား၏ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်လာတဲ့’လေမင္သူမ်ား’။»အချို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊ကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုကမ္ဘာကြီးကိုလိုအပ်သည်လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အသစ်အဖွဲ့ဝင်များ၊အချို့သောသန့်နှင့် အသုံးပြုသူများ၏။»လူတို့တွင်သူတွေ့ဆုံသူတို့လက်ရှိမိတ်ဖက်များအကြားနှင့်ထက်လျော့နည်းအတွေ့အသီးအသီးအခြားအပေါ်ဒီဆိုဒ်အမျိုးအစား၊»ဟု ။ လူအများစုအတွက်စစ်တမ်းပာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရရှိသွားတဲ့»ရံဖန်ရံခါရက်စွဲများ»သို့မဟုတ်အပျော်ပေမယ့်လေးနက်တဲ့မဟုတ်။ ဤလိုင်းများနှင့်အတူတက်ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ပြီးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ။ အွန်လိုင်းတွင်ငွေပေးချေဟုသူတို့ထင်သကဲ့သို့၊ထိုသူတို့ကို၏နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ဖို့ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပျော်စရာ၊မချစ်။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်လာရန်အရေးကြီးပါတယ်၊သို့သော်၊အချို့အတွင်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် é။ ကာလအတွင်းအသက်ရှိသောအခါအသေးငယ်ချိန်းတွေ့ရေကူးကန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လူမှုရေးစက်ဝိုင်းအဓိကအားဖြင့်ဖွင့်ထားစုံတွဲများ၏၊ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်လာအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်လမ်းမှဖြည့်ဆည်း။ အဘို့နှင့်လိင်တူစုံတွဲများအတွက်ပြင်သစ်၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုအမှန်တကယ်အရေအတွက်ကိုတလမ်းတည်းဖြင့်ရှာဖွေဖို့။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အထိပ်နေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုအခုထိအကောင်းအဟောင်း။ ရှိတယ်ဆိုရင်မည်သည့်နိုင်ငံသားသင်ထင်မှာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်အများကြီးအကူအညီအတွက်ချိန်းတွေ့ဌာန၊ပြင်သစ်။ သောအခါကျနော်တို့၏ထင်သောအများဆုံးရင်ခုန်စရာလူလောကအတွက်၊ကျနော်တို့နီးပါးဆက်ဆက်ထင်၏။ ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကြိုက် နှင့်ပြင်သစ်ရေမွှေးကြော်ငြာများရှိပရိုဂရမ်မှကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်သောသဘာဝ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊၊အချစ်ဇာတ်လမ်းမလွှဲမရှောင် ရိုးရှင်းစွာအကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ခြေလျင်တိုင်းပြည်အတွက်။ ကျနော်တို့စိတ်ကူးအချစ်လာရန်လွယ်ကူသောအ လူနှင့်အတူသူတို့၏ကဗျာဆန်၊ညှို့ဘာသာစကားနှင့်၎င်းတို့၏အဘယ်သူမျှမပျော့သွားဖို့ချဉ်းကပ်မှုအချစ်ဇာတ်လမ်း။ ကလွယ်ကူမယ့်ပုံလှပသောပြင်သစ်စုံတွဲစိုက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျသွားကျော်တစ်ရက်ပြီးတစ်ဖန်ခွက်နှင့်အနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုအပေါ်တစ်ဦးရိုကျန်ကြွင်း၊အဖယ်မျှော်စင်မှိတ်အတွက်နောက်ခံ။ ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်တကယ်ကိုဒီတော့အစဉ်အလာရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်သူတို့ကတကယ်တော့ အစဉ်အလာ၏မျက်နှာသာအတွက်ခေတ်သစ်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ခေါ်အင်တာနက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း။ ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပြောင်းလဲသင်ချိန်းတွေ့ဂိမ်းအတွက်။ ဒေသခံသိမ်းယူထားမှာကြည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ်ပြင်သစ်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လေ့အထများ၊အတွက်ဖြန့်ချိကလိြဳင္ေ၊အမျိုးသားနိုင်ငံ။ သာအခါ၊သာအိမ်ေထာင်စုများအတွက်နိုင်ငံခဲ့၊သားပြင်သစ်လူမျိုးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သော။ နောက်ခုနစ်နှစ်၊ဒီအရေအတွက်နှင်းဖို့အကြားနှစ်အရွယ်။ ဤသည်အထင်ကြီးအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချို့သော ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊နေရာသာအရြယ္ေရာက္ၿသွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်။ ၊ချိန်းတွေ့နည်းပြအတွက်၊ပဲရစ်မြို့ကြောင်းထင်နေတဲ့လူအတော်များများကိုလှည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်မကြာခဏလည်းမာနထောင်လွှားသို့မဟုတ်လွန်းအများ၏ကြောက်လန့်ပျက်ကွက်လူေတြထဲကလူ။»ဒီရက်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးအတွက်ထက်အခြားနိုင်ငံများရှိရဲ့မာနထောင်လွှားတွေအများကြီးကြောက်ရွံ့စေ၊ဒါကြောင့်ပြင်သစ်ဘူးတွေ့ဆုံရန်လူများအလွယ်တကူ၊»ျပည္တြင္း။»ဒါဟာမလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုကိုချဉ်းကပ်ဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်လမ္းအတွက်၊တစ်ဖီး၊သို့မဟုတ်လိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရုံသောကြောင့်၊အင်္ဂလိပ်တွေကိုအမြဲကြောက်ကြတယ်စတင်။ သူတို့ကလည်းအများကြီးရှိသည်။»ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်အောက်မှာနေသော။ မလွန်းအံ့အားသင့်မစဉ်းစားဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုကအသုံးပြုအင်တာနက်ကိုအများကြီးနှင့်အပြည့်အဝအ၏တစ်ဦးတစ်။ အတွက်-အကွာအဝေးရှိပါတယ်၊အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးကဤဆိုဒ်များပေါ်မှာ၊ဖြစ်ကောင်းကြောင့်အမျိုးသားများအလေ့အထသို့ရလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအကြာတွင်ထက်အမျိုးသမီး။ ဒါပေမဲ့ဒီကွာဟမှုဟန်ချက်နှင့်အတူထွက်အသက်အရွယ် ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနောက်ကြောင်းပြန်။ မာရီ ၊ကော်မရှင်၏လိြဳင္ေလေ့လာမှု၊ေျပာကလုံးဝလက်ခံပါတယ်၊လွန်းမကြာခဏမြင်ရန်တစ်လမ်းအဖြစ်လူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်»ပုံမှန်အားဖြင့်»။ သာထက်ဝက်ခန့်၏အင်တာနက်တွင်ငွေပေးချေမည်အလွယ်တကူ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်း ဖို့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု။ ကြွင်းသောသူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝန်ခံဖို့သာအနည်းငယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖွင့်အနည်းငယ်အပြေးဟာသပြင်သစ်တွင်ရှိသည်ဖို့အမည္တူရိုတူရာတစ်ခုခုဆိုလျက်:»အကြှနျုပျတို့သညျကိုပြောပြလိမ့်မယ်လူတွေ့မှာပ။»အဖြစ်ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပိုလူကြိုက်များပြင်သစ်တွင်၊သူတို့ပြောင်းလဲလာရန်လူမှုရေးအရမတူကွဲပြားပေမယ့်လည်းပိုပြီးလျာထားသော။ သော်လည်းပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေ၍အဓိကမြို့ပြ(ပြင်သစ်နိုင်ငံ)အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပညာရှင်များ၊အသုံးပြုသူများပိုပြီးဖြစ်လာကြပါပြီကွဲပြားသောအတိတ်ဆယ်နှစ်။ သို့သော်ဤအတိအကျဆိုလိုကြောင်းလူတွေပိုပြီးချိန်းတွေ့ကြသောဖြတ်ပြီးလူမှုရေ တကယ်တော့၊ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေများကိုခွဲများနှင့်လူမှုလိုင်းများ။»ကျွန်တော်တို့မြင်တစ်ဦးအားကြီးသောကြူး၏ဆိုဒ်များပစ်မှတ်တိကျတဲ့လူဦးရေ:လူအချို့ အသက်အရွယ်၊တည်ရှိမှု၊လူမှုရေးအုပ်စုများသို့မဟုတ်ဘာသာတရား»ဟု ။»အမင္သူမ်ား၏ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်လာတဲ့’လေမင္သူမ်ား’။»အချို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊ကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုကမ္ဘာကြီးကိုလိုအပ်သည်လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အသစ်အဖွဲ့ဝင်များ၊အချို့သောသန့်နှင့် အသုံးပြုသူများ၏။»လူတို့တွင်သူတွေ့ဆုံသူတို့လက်ရှိမိတ်ဖက်များအကြားနှင့်ထက်လျော့နည်းအတွေ့အသီးအသီးအခြားအပေါ်ဒီဆိုဒ်အမျိုးအစား၊»ဟု ။ လူအများစုအတွက်စစ်တမ်းပာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သူတို့ကိုရရှိသွားတဲ့»ရံဖန်ရံခါရက်စွဲများ»သို့မဟုတ်အပျော်ပေမယ့်လေးနက်တဲ့မဟုတ်။ ဤလိုင်းများနှင့်အတူတက်ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ပြီးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ။ အွန်လိုင်းတွင်ငွေပေးချေဟုသူတို့ထင်သကဲ့သို့၊ထိုသူတို့ကို၏နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ဖို့ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပျော်စရာ၊မချစ်။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်လာရန်အရေးကြီးပါတယ်၊သို့သော်၊အချို့အတွင်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် é။ ကာလအတွင်းအသက်ရှိသောအခါအသေးငယ်ချိန်းတွေ့ရေကူးကန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လူမှုရေးစက်ဝိုင်းအဓိကအားဖြင့်ဖွင့်ထားစုံတွဲများ၏၊ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်လာအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်လမ်းမှဖြည့်ဆည်း။ အဘို့နှင့်လိင်တူစုံတွဲများအတွက်ပြင်သစ်၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကိုတလမ်းတည်းဖြင့်ရှာဖွေဖို့။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အထိပ်နေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုအခုထိအကောင်းအဟောင်း။ ကျင်သန်းလူတွေသူတို့ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံအားဖြင့်နူးညွတ်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်၏။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်သောင်းမကဘဲ၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများအဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ချဉ်းကပ်၊တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများစစ်တမ်း*ကြံပြုရှိခဲ့ဘယ်တော့မှမဖွင့်မှပိုကောင်းတဲ့အချိန်ကတိုက်ရိုက်ပြည်ပ။
ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်အခမဲ့အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကမ်းလှမ်းကြောင်းအဖိုးတန်အကြောင်းအရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဝန်ဆောင်မှုများမှသုံးစွဲသူများ။ စောင့်ရှောက်ရန်ဤအရင်းအမြစ်အခမဲ့ရထံမှလျော်ကြေးအများအပြားကမ်းလှမ်းအပေါ်ဖော်ပြထား။ အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချက်များ၊ဒီလျော်ကြေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လိုအဘယ်မှာထုတ်ကုန်များပေါ်လာဝဗ်ဆိုက်(အပါအဝင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အရာအတွက်အမိန့်သူတို့ပေါ်လာ)။ ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်တွေမပါဝင်ပါဘူးတစ်ခုလုံးကိုဠာ၏ရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းမှု။ အယ်ဖော်ပြထင်မြင်ယူဆကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တင်းကြပ်စွာအစားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်မထောက်ပံ့၊ထောက်ခံ၊သို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကြော်ငြာ။ ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးလုပ်လေ့မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးက-လာမည့်တံခါးဇာတ်လမ်းဟန်တူအဆိုပါစံပြလမ်းရှာတွေ့ဖို့ချစ်၊သို့သော်အဘယ်လျှင်သင့်ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖြစ်ပျက်အသက်ရှင်ဖို့ကမ္ဘာအနှံ့။ ခင္ဗ်ားဟာရှာဖွေနေသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာ၊သင်ဘယ်တော့မှရှာတွေ့သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေးဖို့တစ်ဦးတစ်ချဲ့ဖို့သူတို့ရဲ့ကုပ်နှင့်အတူသူတို့ကိုပေးရန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပြုပါဒါကြောင့်။ အခြား။ သူတို့အားလုံးဟာအခမဲ့။ စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့နှင့်အတူအချိုပွဲပထမဦးဆုံး၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊သင်ပြောပြအကြောင်းကိုပိုမိုခြုံငုံနိုင်ငံတကာထိပ်တန်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။ ဤအကျယ်အသုံးပြုသူခြေစွပ်၊အထင်ကြီးအင်္ဂါရပ်များ၊နှင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းထားများ၊ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်မှားယွင်းနေမသွားနိုင်ဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်ရွေးချယ်။ သင်၌စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာချိန်းတွေ့ဖြစ်ချိန်းတွေ့သူတစ်ဦးရဲ့ပညာတတ်၊ထက်မကနောက်ထပ်ကြည့်ရှုဆီတစ်ဦးတစ်၊ဆိုက်အနှံအတူတကွသို့ဆောင်ခဲ့တတ်၊စိတ်တစ်ဦးတစ်။ ကျော်ဆိုက်၏အဖွဲ့ဝင်များကိုကိုင်တစ်ဦးရဲ့ဘွဲ့၊မာစတာ၊သို့မဟုတ်ဒေါက်တာဘွဲ့ဒီဂရီ(သို့မဟုတ်သုံးဦးစလုံး)၊သူတို့ကရောက်မှကျော်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူပြော:»ဆီတစ်ဦးတစ်ယောက်ကဦးဆောင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုပဲအလုပ်များသည်၊တစ်ခုတည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်။ ပိုထက်အဖွဲ့ဝင်များသည်ရရှိခဲ့ပြီးပါပြီ၊ဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရ၊ နှင့်အများဆုံးအဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ကတိကဝတ်။»အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်»သင်ကဘဏ်ကိုမချိုးမည်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အဆီဖြစ်စေတစ်ဦးတစ်အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကြောင်းဘယ်တော့မှကုန်ဆုံးပြီးခွင့်ပြု၊သင်တို့မှတ်ပုံတင်ရန်၊သင့်ရဲ့အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများ၊ရာက္ၾပရိုဖိုင်း၊ခံယူပွဲအကြံပြုချက်များ၊နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကနေတဆင့်အကြိုက်ဆုံးနဲ့အသွင်အပြုံးများ။ မသာပွဲစဉ်များထက်ပိုရရှိနိုင်ပါနိုင်ငံများနှင့်ရှစ်သည္ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးထက်သန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊အမြင်ထက်ပို။ သန်းကိုဧည့်သည်များကတစ်လနှင့်တာဝန်ရှိသည်များအတွက်ပိုပြီးချစ်ဆက်သွယ်မှုများထက်မဆိုအခြားချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်၊ဤအကြောင်းပြချက်အသိအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဦးတည်ရာအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူပြော:»ကိုက်ညီခဲ့သည့္အတြက္စည္စည္ကားကားဆုံးရက်စွဲများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအများမည်သည့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ကြီးမားသောပရိသတ်ကိုနှင့်မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုနှုန်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဆန်းစစ်ခြင်း။»အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်»တစ်ချိန်ကသင်ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီး၊အလုပ်သင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်တည်နေရာအဖြစ်အခြားအရေးကြီးသောအရာကဲ့သို့အသက်အရွယ်၊အသွင်အပြင်၊အကျိုးစီးပွား၊နောက်ခံ၊တန်ဖိုးများ၊လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ယူကရိန်းသတို့သမီးအေဂျင်အတူတကွယှဉ်၏ပညာရှင်ပီသစွာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးအစိတ်အမျိုးသားများနှင့်အတူလှပသော၊အကောင်း၊နှင့်ရယ်စရာအမျိုးသမီး။ အများစုကအမျိုးသမီးထံမှယူကရိန်းနှင့်ရုရှား၊သူတို့အားလုံးဟာအဘို့အရှာနေသူတို့ရဲ့နိုက်ထွန်းလင်းသံချပ်အတွက်။ အခမဲ့သက္သာဖန္တီးျခင္းအပရိုဖိုင်၊အွန်လိုင်းအောင်သွယ်ပွဲစား၊ချက်တင်ကနေတဆင့်အီးမေးလ်၊ဗီဒီယို၊အသံ(မိန်းမတို့အဘို့)၊နှင့်ဖောက်သည်အထောက်အပံ့။ အိပ်မက်တစ်ဦးတစ်သင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အိပ်မက်တည်းစက္ကန့်အတွင်းအခမဲ့။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်ထသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမကို၊လိင်၊အသက်အရွယ်၊စကားဝှက်ကို၊နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ထိုအခါအိပ်မက်တစ်ဦးတစ်ယောက်အမည်လက်ကောက်လိုက်ဖက်ဖက်ထဲကသူတို့ရဲ့သန်းပေါင်းများစွာ၏အဖွဲ့ဝင်များ။ အချို့သောအခြားပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်သောအိပ်မက်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်-မျိုးသမီးများ-အမျိုးသားများအချိုးအစား၊ရှိပါတယ်မြောက်မြားစွာလုံခြုံရေးအစီအမံထဲမှာထည့်သွင်းနေရာမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့အချက်အလက်၊နှင့်အရှည်ကြာဆုံးရပ်တည်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ပတ်လည်တည်ထောင်ခြင်း၊မျိုးဆက်ချစ်တို့တွင်အများဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သည်နိုင်ငံတကာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ဤနယ်ပယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဆိုက်ခွင့်ပြုခမဲ့လှန်လှောကြည့်ရှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ပရိုဖိုင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဦးစားပေး(တည်နေရာ၊အသက်အရွယ်၊ကျား၊အဆင်း၊စသည်တို့ကို။)၊အသံုးျပဳေျပာအရေအတွက်ပျော်စရာနည်းလမ်းများ။ ရှိနိုင်ပါသည်စဉ်တွင်သီးႏွံေထွက်ရှိပါတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာအမျိုး၊ကိုယ့်အလွ်ာ့ေစ်းျ၊သေချာပေါက်မယ်။ သန်းပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးတစ်ယောက်အဘို့အရှာဖွေနေတစ်စုံတစ်ဦးကအထူးမျှဝေဖို့သူတို့ရဲ့အသက်တာနှင့်အတူ၊နှင့်အထူးတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်စေခြင်းငှါကမ္ဘာအနှံ့။ ဒီမည္ဆိုေ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်စစ်ဆေးအစာရင်းများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအတွက်ထောင်။ အခါကျနော်တို့၏ထင်သောအထောင်စိတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ကျွန်တော်ထင်၏။ ဆိုက်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်တင်းကြပ်စွာတစ်ဦးတစ်ရှာဖွေနေများအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊ဒါကြောင့်သင်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်အားဖြင့်ပေါင်းပင်မှအရည်အသွေးကိုက်ညီမှုရှိ။ တကယ်တော့၊သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်မည်သည့်ပေါင်းမှာအားလုံး။ ပြီးနောက်သင်ယူ ရဲ့သီးသန့်စိတ္မးခြန္း၊ဆိုက်ပြုလိမ့်မည်အားလုံးကိုက်ညီ။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရသို့မဟုတ်လုံးဝမ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူပြော:»စာရင်းကိုင်များ၏။ ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊ ရဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့-အခြေခံစနစ်နှင့်ကတိကဝတ်စိတ်အသံုးျပဳသူမ်ားအခြေစိုက်စခန်းသည်စံပြများမှာရှာသောသူတို့သည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။»အပြည့်အဝအတူတကွလေ့လာရန်»အတွက်၏စည်းကမ်းချက်များနံပါတ်များ၊ ထားပါတယ်ခံရဖို့အများကြီးအပါအဝင်၊ဒါကြောင့်ရရှိနိုင်သောတိုင်းနီးပါးတိုင်းပြည်နှင့်အပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖြစ်ပျက်သောကြောင့်၊။ အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများခဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအတွက်ဤနယ်ပယ်များအတွက်ပိုထက်အနှစ်၊ဒါကြောင့်သင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်စနစ္ကအစစ်အမှန်၊နှင့်ဆိုက်သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံ။ တစ်ခုတည်းယောက်ျားနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ပြီးရာက္ၾဘဲပေးရဖို့သူတို့ရဲ့အကြွေးကဒ်အချက်အလက်၊နှင့်အရာအားလုံးကိုလုံးဝအခမဲ့များအတွက်အမျိုးသမီး။ ဒီတမင်္ဂလာစုံတွဲခဲ့ကြောင်းပြောဖို့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်ဆိုက်:»ကျနော်တို့မေတ္တာ၌ပြပ်ဝပ်၏ဒေါက်ကျော်ဦးခေါင်း၊ဒါကြောင့်နေဆဲကဲ့သို့ခံစားရတစ်နတ်သမီးပုံပြင်ပုံပြင်။ ခြောက်လကြာပြီးနောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်။»အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်၊နိုင်ငံခြားရည်းစားယုံကြည်သင့်မတင်ကန့်သတ်အပေါ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အရာသည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများနှင့်အရှေ့ဥရောပအမျိုးသမီးများအတွက်ချစ်ကြည်ရေး၊ရက်စွဲများ၊ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ တက်လက်မှတ်ထိုးအဖြစ်၊ကြည့်ရှု ပရိုဖိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ၊ပရောပနှင့်ဆက်သွယ်မှမကုန်ကျမှာ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးတစ်၊ထိုကဲ့သို့သောအီးအိုအဖြစ်၊လုပ်ငန်းရှင်များ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊မကြာခဏရှိသည်အလုပ်ရှုပ်နေအသက်တာ၏အပြည့်အဝအလုပ်ကတိကဝတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေဘို့အဆက်ဆံရေးအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်လျှင်၊ဆွဲဆောင်ဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီး။ ဒီအပိုင်းအစအပ်နှံသည်သူတို့အားယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘယ်သူသည်လိုအပ်ပဲအနည်းငယ်အကူအညီလာမယ့်အတူတူ။ အစည်းအဝေးတတ်ကျွမ်းကျင်သူများရေခြားမြေခြားအပေါ်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒါကသေချာပေါက်အတူအမှုမဖြစ်ဆီတစ်ဦးတစ်ယောက်၊တစ်ဆိုက်အားဆက်ကပ်အပ်နှံ၊တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကောလိပ်ပညာတတ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူပြော:»ဆီတစ်ဦးတစ်ယောက်ကဦးဆောင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုပဲအလုပ်များသည်၊တစ်ခုတည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်။ ပိုထက်၏အဖွဲ့ဝင်များရရှိခဲ့သည်ပါပြီကောလိပ်မှဘွဲ့၊နှင့်အများဆုံးအဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ကတိကဝတ်။»အပြည့်အဝအတူတကွလေ့လာရန်»အထက်တန်းလွှာတစ်ဦးတစ်အတွက်ရရှိနိုင်နိုင်ငံနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအခမဲ့အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအသုံးပြုသူများအတွက်။ နှင့်အတူအစာရှောင်-ကြီးထွားလာအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အဆင္ေအင်္ဂါ၊သေချာရှာဖွေဖို့အကိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးနဲ့တူ-စိတ်တူ၊ပညာတတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အနည်းငယ်အခမဲ့အွန်လိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။ ဒါကြောင့်ကုန်ကျမည်မဟုတ်ဘာမှလုပ်:မွတ္ပံုတင္အပရိုဖိုင်၊လှောထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးတစ်ကိုဖန်တီး၊တစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးစာရင်း၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးက၊ေပးပို။ သူတို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့၏အမည်ရက်စွဲများပြည်ပကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်ရက်စွဲများ။ မပဲဆိုရက္ကိုဟ။ ဖန်တီးအခမဲ့လော့ဂ်အင်နှင့်သတ်မှတ်သင့်စိတ်ကြိုက်၊နှင့်ဆိုက်အရာကြွင်းလေသမျှပြုပါမည်ဟု၊ပေးပို့ခြင်းလက်ကောက်ပွဲများအချက်များကိုကြည့်ပါ။ ထိုအခါသင်အသုံးပွုနိုငျသူတို့ရဲ့အသံနှင့်ကမ်ချက်တင်အခန်းပေါင်းအရရှေ့တော်၌ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိရစီအစည်းအဝေး။ အခြားအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ရက်စွဲများိင္သည္ကိုယ္ေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု(ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္နှင့်ပယ်ဖျက်သင့်အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများမှာမည်သည့်အချိန်)၊လှန်လှောကြည့်ရှု၊သွင်ခတ်၊မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပိတ်ဆို့စာရင်းများ၊နှင့်အီးမေးလ်။ အဘယ်ကြောင့်သင်အဘို့သင့်ရှာဖွေရေးကန့်သတ်ရန်သင့်ချစ်၏မြို့၊ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအခါသင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ကတက်မှတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာ။ နိုင်ငံတကာလူပျိုမိန်းကလေးများသည်စိတ်ကူးအခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီယံအင်္ဂါရပ်များကိုပူဇော်။ တူမျက်နှာချင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြု။ ဖြစ်ခြင်းတည်းရင့်ကျက်(ရှိမရှိသင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၊အတွေ့အကြုံကွာရှင်း၊သို့မဟုတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သင်၏ငယ်နှစ်)မဆိုလိုပါဘူး၊ဒါကြောင့်နောက်ကျလွန်းရဲ့အချစ်အတွက်၊နှင့်ဤနိုင်ငံတကာတန်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကြောင်းသက်သေပြ။ ရှိသည်သောသူတို့အဘို့တိကျတဲ့အသက်အရွယ်မှာစိတ်ကိုအတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မိတ်ဖက်၊ကျနော်တို့အကြံပြုပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်စမ်းကြည့်ပါ။ စဉ်အများစုသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းအတွက်အသက်အကွာအဝေး၊မည်သူမဆိုနှင့်ကျော်သည်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ဒါကြောင့်ကုန်ကျမည်မဟုတ်သင်သည်တစုံတခုကိုပြုနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူပြော:»ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ကိုယ့်ယောက်ျားနှင့်နေသောအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အဟောင်းတွေ၊ဒါကြောင့်တဦးတည်းရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ဤနယ်ပယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏အရွယ်အစား။»အပြည့်အဝအတူတကွလေ့လာရန်»အခြားရေးနှင့်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုး၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်၏ကိုယ္ေလည်းပေါ်ပေါ်လာတန်းလူတွေ့ဆုံရန်အဖြစ်၊ဤသည်များမှာအစ်မ။ သင်ရလိမ့်မယ်နှစ်ခုစျေးနှုန်းအဘို့အတယောက်ပြီးချဲ့ထွင်လက်လှမ်းမမီ။ ရှိမရှိသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏ရင့်ကျက်အသံတိတ်သို့မဟုတ်ကလေးအဆက်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ပြော:»ငွေတစ်ဦးတစ်ကုဆက်ဆံရေးစိတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကျော်နှင့်အတူ၊ရိုးရှင်းဘေးကင်းလုံခြုံ၊ထိရောက်သောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကိရိယာ။»အပြည့်အဝအတူတကွလေ့လာရန်»အကြောင်းရင်းများပါဝင်သောအဖွဲ့ကစောင့်ရှောက်။အပေါ်မျက်စိများပြရန်နှင့်လိမ်လည်၊ဆိုက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ျဖင့္ထောက်ခံချက်များ၊နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်း၏အများဆုံး။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ကောင်းကင်တမန်သည်ပြန်လာဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါသည်ရှာဖွေရေရှည်ဆက်ဆံရေး၊မပေါ့ပေါ့စိုကျ။ အသက်အရွယ်အပေါ်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားဒီအွန်လိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ဒါကြောင့်သင်ချည်နှောင်တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းဖို့သင်နှိပ်နှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားသောဤဝန်ဆောင်မှုတက်လက်မှတ်ထိုး၊ပဳႏိုင္ရန္၊အကျိုးစီးပွားဖေါ်ပြခြင်း၊စကားပြောနှင့်စာတိုပေးပို့၊ဗီဒီယိုကွန်ဖ၊ဖိုရမ်တင်၊လက်ခံခြင်း၊ပေးပို့ခြင်း၊ရယူခြင်းဆက်ဆံရေးအကြံဉာဏ်တွေ၊နှင့်ဘွတ်ခရီးသွားလာအားလုံးအခမဲ့? ရှာဖွေခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နောက်လာမည့်တံခါးသည်ကြီးလှပေ၊ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အနည်းငယ်ပိုတစ်ခုခုကိုဂလိုဘယ်၊ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်င့်ကွေ့မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေစာရင်းကိုအပေါ်အထက်။ ဘွန်နေပါတယ်။ အဖြစ်အထောက်အယ်ဒီတာများအတွက်ချိန်းတွေ့ အကြံဉာဏ်၊ ရဲ့သုတေသနနောက်ခံရရှိထားဖို့ကောင်းသုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဆောင်းပါးများနှင့်ကိုလမ်းညွှန်များအတွက်အကြောင်းကြားအကြံဉာဏ်။ သူမ၏မွေးနေ့အပေါ်သစ်စွန့်စားရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းများကိုမူထူးခြားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည်ချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူများသူငှပညာတွင်’ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုချိန်းတွေ့’နေ့စဉ်။ ခွင:အလွန်ကြီးစွာသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအလုပ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာအားလုံးအပေါ်ကမ်းလှမ်းပေးအပ်သည်။ သို့သော်၊ဒီအချက်အလက်ပေးအာမခံမရှိဘဲနဲ့။ အသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအပေး့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်လက်ရှိစည်းကမ်းချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံလျော်ကြေးမှအများအပြားကမ်းလှမ်းအပေါ်ဖော်ပြထား။ အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချက်များ၊ဒီလျော်ကြေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လိုအဘယ်မှာထုတ်ကုန်များပေါ်လာဝဗ်ဆိုက်(အပါအဝင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အရာအတွက်အမိန့်သူတို့ပေါ်လာ)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်င္သည္တစ်ခုလုံးကိုဠာ၏ရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းမှု။ အယ်ဖော်ပြထင်မြင်ယူဆကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တင်းကြပ်စွာအစားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်မထောက်ပံ့၊ထောက်ခံ၊သို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကြော်ငြာ။
ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဝင်သင့်ရဲ့အချက်အလက်၊သင်အခြေအနေကိုကျပန်း ဘယ်မှာသင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရလိမ့်မည်အပေါင်းတို့အားရရှိနိုင်။ တဦးတည်း၏အပေါ်ဆုံးအများဆုံးနှင့်ပထမဆုံးစတင်ပြင်သစ်ချက်တင်ကစားတဲ့သည်ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ဒါဟာစတင်ခဲ့အစောပိုင်း၌ယခုရှိပါတယ်ထွန်းကိုယ်တိုင်ကဘဲအသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကမ္ဘာအနှံ့။ အဖြစ်လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်၊အများစု၏အသွားအလာမှပြင်သစ်နှင့်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းထံမှလာသောအင်္ဂလိပ်လူမျိုး။ လူသောသူတခြားနိုင်ငံတွေထဲကနေအဂၤလိပ္စလည်းအထောက်အကူင်း၏တိုးတက်မှုနှင့်လူကြိုက်များ။ အချိန်ထက်ပိုစိမ်းပြသကြသည်အွန်လိုင်းပေါ်ချက်တင်ကစားတဲ့။ ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖုအနှုန်းအတွက်အပေါင်းတို့၏ထိပ်ကိုချက်တင်ဆိုက်များနှင့်အလာအတွက်ထိပ်တန်းဋ ရာထူးကပေး ။ အများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ကိုအကြောင်းပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖုကအမှန်တကယ်အလွန်အေးမြသောအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်း။ အဆိုပါျပင္သစ္ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စကားပြောခွင့်ပြုတည်ထောင်ရန်ကွန်ဆိုလူစိမ်းတွေနဲ့အလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်။ သင်အလွယ်တကူတက်ချိတ်နှင့်အတူမည်သည့်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးချင်တယ်ဤသုံးပြီး။ အဆိုပါရွေးချယ်မှု၏ကောင်လေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးချင်တယ်ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းချက်တင်ပဲပေါ်မူတည်၏တစ်ခုတည်းကိုနှိပ်ပါ။ ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂါမေ့သို့တစ်ထုပ်ရယူသုံးရိုးရှင်းတဲ့အသုံးပြုသူ။ ဖွင့်လှစ်ရန်ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖစ္သျပေါ်တွင်နှိပ်ပါစတင်ခလုတ်ကိုထို့နောက်သင်ပြသနှင့်အတူပေါ်လာမည္မေးဖို့ခွင့်ပြုချက်သင့်တည်းဖြတ်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကင်မရာက။ ဤအဂၤါရပ္ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အဖြစ်မြင်နိုင်အပေါင်းတို့သည်တပါးအမျိုးသားအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့တွေ့မြင်နိုင်သည်သင်တိုက်ရိုက်နှင့်ပြသနိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ကြဉ်း။ ဤတိုးမြှင့်နိုင်၏ပရောနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများမှလူကိုဆွဲဆောင်နှင့်အောင်သူတို့ကိုအတွက်စိတ်ဝင်စား ။ ပြီးတာနဲ့သင့်ကင်မရာကိုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်စတင်စကားပြောခန်းတစ်ဦးအစုံအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုမြင်နိုင်ဖြစ်လာ။ ဒါ့အပြင်၊သငျသညျရွေးချယ်မှုတစ်ခုရရွေးချယ်ဖို့လိင်နှစ်သက်တူအမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး။ မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်အတွက်စိတ်ဝင်စားတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ဆင်းဖွင့်သင့်ကင်မရာနှင့်အရွှေ့မှအခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ရွေးချယ်မှု၏။ တစ်ခုမှာပြင်သစ်နိုင်ငံချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းသည်သင်ကြားပြောင်းလဲဘာသာစကား၏ရွေးချယ်မှု၏၊မဖြစ်လိုအပ်သောခံရဖို့သင်တို့အဘို့အတွက်ဖိုင်အသုံးပွုဖို့ဤကွန်ရက်ကြောင့်၎င်း၏ရင်းနှီးဖော်ရွေ ။ အကောင်းဆုံးအရာကပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့အကြောင်းသင်အလွယ်တကူစတင်ချိန်းတွေ့လူကျပန်းမှာ။ ဒါ့အပြင်၊ဒါကြောင့်ပြသကြားအကွာအဝေးသင်နှင့်အသုံးပြုသူသင်စကားပြောနှင့်အတူ။ ဒီအတွက်အထောက်အကူအနေနဲ့အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးထိန်းမရ။ ပြင်သစ်အဖြစ်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခဲ့သည်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်အတွက်မှတ်ပုံတင်၊သင်အမည်မသိနှင့်အဖြစ်အခမဲ့ညစ်ပတ်ပြောဆိုပါ။
ရရန်မည်သို့အကျွမ်းနှင့်အတူလူတ။ မေးခွန်းတစ်ခုရှိကြောင်းမဆုံးရှုံး၎င်း၏ဆီလျော်မှု။ ကြ့ကြိုးစားဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ဒီနေ့အတွက်၊အခြေအနေများ၏စုစုပေါင်းအလုပ်အကိုင်နှင့်အားနည်း၏လူမှုဆက်ဆံရေး။ အတူစတင်ရန်၊သင်လိုအပ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိမရှိကိုယ်အဘို့သင်အမှန်တကယ်သိရန်ရချင်ယောက်ျားသင်သည်အဘယ်သို့ရန်ဆန္ဒရှိကြပါသည်။ ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘယ်သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့ပြီ၊မီးဖိုချောင်ထဲမှာအထီးကျန်ဆန်ညနေခင်း၊ညူကသူမတှေ့နိုငျအချစ်သောကြောင့်၊အားလုံးအတောင်သူလယ်သမားများမှာဆိတ်။ တချိန်တည်းမှာ၊သူမသည်အနုပညာအတွက်ကျွမ်းဖို့လို၊အနည်းဆုံးအားဖြင့်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းထားရန်အတွက်အမိန့်နှင့်အိမျတျောကိုစွန့်ခွာ။ ထို့အပြင်၊ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးလိုအပ်ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်: လူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခင်ရပါသောမင်းသမီး၊သတိရ:လူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားကြသည်နှင့်ပေမယ့်၊ဆိတ်များကိုလည်းတွေ့ရှိ၊ဒါကြောင့်ကျိုးနပ်အတန်းအောက်၌တဖြီး။ ရန်လိုအပ်သည်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ထုတ်ပြီးနေရာအရပ်ဘယ်မှာ၏ အကောင်း၊အရိယာ၊လျောက်ပတ်သောယောက်ျား။ ငါသည်အမီ၊သင်အဘို့အကြည့်တစ်ဦး၏မေးခွန်းကိုအဖြေရရန်မည်သို့အကျွမ်းနှင့်အတူ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အဘယ်အရပ်မှဆုံးဖြတ်ရန်။ သတိရ၊မအားလုံးအမျိုးသားများအဘို့အသင့်လျော်၏အခန်းကဏ္ဍသည်။ ဒါဟာမလိုအပ်ရကျွမ်းနေသောယောက်ျားတွေဆန့်ကျင်ဖို့အားလုံးကိုအမျိုးသမီးအထွေထွေအတွက်(လည်းပေါ်ပေါက်)။ ဘွဲ့အတွက်လေးဆယ်၊လူကြီးလူကောင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူအမြဲတမ်းအရင်းအမြစ်ဝင်ငွေ၊ ဖယ်ကျဉ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်အထီးကျန်၊လျောက်ပတ်သော၊တည်ငြိမ်ကျွမ်း။ ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်။ ရရန်မည်သို့ကျွမ်းသူတစ်ဦးသည်လူနှင့်တွေ့ဆုံအဲဒီစံ။ စတင်ဖို့။ ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးသမီးများစွာလမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖြစ်စေကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာေသို့မဟုတ်လုံးဝထုတ္ယူမှသူတို့ကိုယ်သူတို့။ စတင်လှည့်ပတ်ရှာ၊အၿပံဳးလိုပဲအမျိုးသားများပင်လျှင်ကိုယ့်အချင်းခရီးသွားအပေါ်ဘတ်စ်ကား။ က နည်းလမ်း၊အခြားသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေနှင့်အတူသူမ၏ခင်ပွန်းကတွေ့ဆုံ:ဤလမ်းမေးဖို့ကူညီသူမ၏အယူထဲကဘတ်စ်ကားလေးလံသောအိတ်။ သူတို့အတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်။ စတင်အလာရောက်လည်ပတ်သောအရပ်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်၊ဒါပေမယ့်လျောက်ပတ်သောလူကြီးလူကောင်း။ ဒီအနှီးဖော်ရွေပါတီသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်၏(တစ်ဦးစံပြနေရာအထိလူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်)၊ခ။ မှာထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များ၊အာမခံသောသူအပေါင်းတို့သည်ပြင်လျောက်ပတ်လိမ့်မည်(များသောအားဖြင့်အခြားသူများမဖိတ်ခေါ်သောကုမ္ပဏီ)နှင့်ဖော်ရွေလေထု၏လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွမ်း။ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမေးမှသင်မိတ်ဆက်ဖို့အထီးကျန်ဆန်။ ယောက်ျား။ ကိုယ့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်:မမျှော်လင့်ကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းလိမ့်မည်လက်ထပ်သင်ချက်ချင်း။ အရာအားလုံး၎င်း၏အချိန်၊နှင့်ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေး၊ပိုးပန်းသို့လှည့်၊ဒါပေမယ့်သာထိုအခါ၌အမင်္ဂလာဆောင်များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံး။ ပင်လျှင်သင်ရိုးရှင်းစွာနေဖို့အတွက်ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေး၊ဘဝတောက်ပဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်၊နာရီအရေအကုန်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ရရန်မည်သို့အကျွမ်းနှင့်အတူလူအများပြည်သူနေရာများ၌။ ထင်မြင်ချက်ရှိပါသည်ကြောင်းကောင်းပြုဖေးအတွက်၊ကလပ်အသင်း၊ ခန္း။ ဒါပေမယ့်အဟောင်းတွေကလူရွှေ့၊လိုအပ်သည့်ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှု။ သောကြောင့်အခြားလမ်းလည်းရှိ၏ချိန်းတွေ့၊အလွန်ခေတ်မှအမြင်ငါ၏ပွိုင့်။ လျှင်၊ချစ်ခင်ရပါသောမင်းသမီး၊ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနေကြဆိုလိုသည်ကိုသိသောကိုယ်သည်အဘယ်သို့သွားအတွက်ကလပ်အသင်းနှင့်ကဖေးအခဲ၊အများဆုံးမကြာခဏအတူ။။။။။ င့္အခန္း၊ကစားသမား၏နှစ်ဦးစလုံးလိင်၊ပထမ၊စေ့စပ်နေကြတယ်၊နေ့တိုင်းမှာကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်၊နှင့်၊ဒုတိယ၊၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါဘူးဆက်သွယ်ရေး၊သို့သော်၊ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ထိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူတို့၏လုပ်ရပ်။ ထို့ကြောင့်၊အပေါ်ဆုံးဖြတ်အသိအကျွမ်းအတွက်ခန်းမ၊အလိုအားဖြင့်သူတို့၏အမျိုးမျိုးအားကစားဆိုင်ရာအင်တာနက်။ တချို့လူတွေကကြောက်ချိန်းတွေ့၏လူအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဒါပေမဲ့၊ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊အခွင့်အလမ်းအစည်းအဝေးထပ်မံအိမ်များမှာမနည်း။ ငါတွေ့ငါ့ခင်ပွန်းကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ ထို့အပြင်၊ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ပင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်၊ငါတင္ထားသည္အတော်လေးအငြင်းအကြှနျုပျအဘို့အသတင်းအချက်။ အနာဂတ်ခင်ပွန်းကြီးကြားသောသူတို့အပေါ်ကျွန်တော့်အမြင်။ ဆက်သွယ်ရေးစ။ တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးမှတဆင့်သွားကွင်းဆက်:စာပေးစာယူအတွက်ကွန်ယက် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး-အမှန်အစည်းအဝေး။ အချိန်ကာလအတွင်းဆက်သွယ်ရေး၏၊ငါတို့သည်အကြောင်းကိုသင်ယူအသီးအသီးအခြား၏အကျိုးစီးပွား၊အများ၏၏သဘောသဘာဝ။ ထိုအချိန်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏နေထိုင်၌ဆန့်ကျင်ဘက်အစိတ်အပိုင်းရုရှားနိုင်ငံ၏၊နှင့်ယခုကျနော်တို့အတူတကွနေထိုင်သည်လေးနှစ်ခု။ တက်ရောက်ဖိုရမ်များကို၊ဖတ်နှင့်မှတ်ချက်ဘလော့ဂ်များမှတဆင့်လှည့်လည်လူမှုကွန်ယက်။ သင်ရွေးချယ်လိုလျှင်ညာဘက်ဖိုရမ်နှင့်လမ်းဆက်သွယ်ရေး၏၊သင်ပိုမိုရလိမ့်မည်။ ပြီးတော့။ သူသိတယ်။ မရောထွေးသွင်ရောနှင့်အတူအမှန်တကယ်အလိုဆန္ဒအဖို့ဆည်းပူး။ အဲသက်သေနည်းလမ်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏:ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။ ဒီနေရာမှာလွန်း၊၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊ကျွန်တော်သိသည်အများအပြားဆိုဒ်များ၊အဆိုပါပံုစံမ်ားများသောအားဖြင့်အမိန့်ကိုပြန်လည်စာရေးဆရာ။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျထားခဲ့ပါခြင်းမပြုမီသတင်းအချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ဆိုက်၊၎င်းသွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ ဖတ်မက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်ဖိုရမ်များ၊ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ရန်ကြိုးစားသောသူတို့အားကိုအသုံးပြုခဲ့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဤဝန်ဆောင်မှု။ မက်ဆေ့ခ်ျများဘော့မှစစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူခွဲခြားရန်။ ရရန်မည်သို့ ကျွမ်းနှင့်အတူလူတ။ ။ မအိမ်မှာထိုင်၊မတိုင်ကြားကြောင်း၊အထီးကျန်၊တက်ကြွရွှင်လန်းသော။
ဒါဟာစနေနေ့ညဥ့်အခါနေထွက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ရည်းစား။ သင်အစက်အပြောက်အနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားအခန်းထဲအနှံ့။ မယ့်အစားနီးကပ်သူ့ကိုသင်လျှို့ဝှက်စွာအားအိပ်မက်အကြောင်းသူ့ကိုမေး၏နံပါတ်အဖြစ်သင်စကားပြောကြောင်းသူ့ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများမှ။ ညဉ့်သည်မကြာမီကျော်၊နှင့်ထားခဲ့ပါနှင့်အတူ ။ က်ာက္တံုးေသာ၏အိပ်မက်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့စူပါဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားကကျွန်မတို့လိုအမျိုးဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကကြက်သားထဲကနေထွက်ပယ်ချတာကြောက်စိတ်ပါ။ မင်းသမီး၊ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းကိုမျှဝေဖို့ငါ့ထိပ်တန်းသွယ်နှင့်ရက်စွဲကိုနည်းပြလျှို့ဝှက်ချက်များ။ သင်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? စူပါဆွဲဆောင်မှုမွှေးသောကောင်လေးရုံဖြစ်၏ကြောက်ငြင်းပယ်အဖြစ်။ မှန်သည်ကြောက်လန့်ပယ်ချ။ ငါဤမျှလောက်များစွာသောဆွဲဆောင်မှု၊အသိဉာဏ်၊အမွှေးအမျိုးသားများအမေးအကြှနျုပျကိုချဉ်းကပ်ရန်မည်သို့အမျိုးသမီး။ သူတို့ထွက်ခွာညလိုသူတို့အဖို့သတ္တိချဉ်းကပ်မှုအချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူကြီးမားအပြုံး။ ဒါကြောင့်၊မင်းသမီး၊အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ အခုကဖို့သင်မှတက်မယ့်ပထမဦးဆုံးပြောင်းရွှေ့စေ။ နှင့်သင်လုံးဝကြောင့်ပြုနိုင်သည်။
ဘယ်လိုအနုပညာရှင်များနှင့်စာရေးဆရာလောကကြီးကိုရှုမြင်။ ကျနော်တို့ကယူမှအဆိုပါလမ်းဆုံလမ်းခွနေရာယဉ်ကျေးမှုတွေ့ဆုံခြင်းသတင်းနှင့်အတူထိတွေဆက်ဆံဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌။ တနင်္လာနေ့ကနေသောကြာနေ့မှာ။ ညနေအချိန်ပဲရစ်။ အလှ၊အတွင်း့လမ်းညွှန်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်၊အကောင်းတရားမှသည္။ ကြာသပတေးနေ့မှာ။ ညနေအချိန်ပဲရစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာင္ကြက္၏ပဲရစ်အခြေစိုက်ဂျာနယ်ဆန်းစစ်ခြင်းထိုအအပတ်ဖန္တီးနိုင်ငံတကာသတင်းများ:အရင္လုိဖန်ဆင်းသောအခေါင်းနှင့်လည်းသူတို့ကိုသင်လွဲချော်ခဲ့ကြပေမည်။ ပူးပေါင်းပြီးသောကြာနေ့မှာ။ ညနေအချိန်ပဲရစ်။
အခန်း၊ များကိုအကောင်းဆုံးချက်တင်အခန်းပေါင်းမှတဆင့်ဝဘ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောတွေ့ဆုံတစ်ဦးတစ်၊နှင့်စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ၊ဒါ့အပြင်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်ဆယ်ကျော်သက်၊ သည္မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်မိုဘိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောခန်း၊ အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုက်ထဲကနေချက်တင်ဆိုဒ်များပေးအသက်ရှင်သောချက်တင်အခန်းပေါင်း၊နှင့်လည်းအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းပေးဖျော်ဖြေရေးအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းအွန်လိုင်းအခမဲ့၊ဒေသခံတစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်းကနိုင်ငံနှင့်အမြို့မြို့၊စ ဖျော်ဖြေဝက်ဘ်အသုံးပြုသူများအားဖြင့်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုက်ပ္။ လည်း၊ပျော်စရာချက်တင်အပေါ် ရွေးနိုင်သည် တိုင်းစကားပြောကွက်မှအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများအပေါ် ။ ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လည်းမည်သည့်အမျိုးအစားစကားပြောခန်းနှင့်အွန်လိုင်းချက်တင်၊ လည်းဖျော်ဖြေဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ချက်တင်အပေါ် ခန္းမ်ား၊စ များကိုဖြည့်စွက်ဘာင္ကြက္ချစ်ချက်တင်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးရဲ့မိန်းကလေးငယ်များ၊လူကြီးများ၊မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကလည်းကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ ကိုရောက်စေဘာသာအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းလွန်းလို့ခရစ်ယာန်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊မြတ္စလာမ္ချက်တင်အခန်းအခမဲ့အွန်လိုင်းမပါဘဲမည်သည့်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူလည်းမှတ်ပုံတင်သူတို့ဝှက်လျှင်သူတို့လိုချင်တာလည်း၊သူတို့မှတ်ပုံတင်နိုင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားပြောခန်း။ ေယူဆ ဆောင်ခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်သြစတြေးလျနိုင်ငံအဘယ်မှာရှိသင်ယောက်ျားတွေချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစလုပ်ဖို့ခံစားဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသက်ရှင်သောချက်တင်အခမဲ့။ ချက်တင်အခန်းပေါင်းအဘို့အခပ်သိမ်းသောအသက်အရွယ်အုပ်စုစကားပြောဆိုချက်၊ခပ်သိမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုနိုင်ချင်မှပူးပေါင်းအင်တာနက်နှင့်ရှာသောချက်တင်အခန်းပေါင်းသို့မဟုတ်အလုပ်နေရှာဖွေနေသူတို့ရှာတွေ့မှအခန်းပေါင်းအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်ကိုက်ကုမ္ပဏီချစ်ချက်တင်နှင့်ချစ်ကြည်သတ်ပစ်ရန်မိမိတို့အချိန် ကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်ရှိသမျှအသက်အရွယ်အုပ်စုများ လူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်လာဘို့အကောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့ဖျင်းသတင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူအမျိုးမျိုးနဲ့မှလူမျိုးရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နိုင်ငံများ။ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်အသက်အရွယ်တိုင်းလူတွေကဟုတ်တယ် ဘူးအကိုအောက်နှစ်ကလေးတွေအသက်အရွယ်အုပ်စုများဆိုလိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ပြီးရင့်ကျက်အသက်အရွယ်တူ၊သို့မဟုတ်တူတစ်ခုခုအကြောင်းလူတွေကိုပူးပေါင်းမဋ္ဋများအတွက်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတွေ့အနားယူချက်တင်ပတ်ဝန်းကျင်။ ဒါ့အပြင်၊နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးနှင့်ဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးပူးပေါင်းဖို့ဒီမှာဆိုအုပ်စု၏အသက်အရွယ်။ အကောင်းဆုံးနေရာအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ချက်တင်မမှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောပူးပေါင်းအခန်းတစ်ပျော်စရာ ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူအများစုကဖော်ရွေစတုတ္ထပုံမှန်ပြန် ။ ချက်တင်။ အေးမြသောချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူရောနှော၏အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်ဖော်ရွေမှုကလူ။ ပျော်စရာမှော်များနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပတ်ဝန်းကျင်
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးသည္ကမ်ခြေခံကျပန်းချက်တင်ကစားတဲ့အစည်းအဝေးအဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဆာဗာများ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်၏တစ်ဖွဲ့လုံးဝန် ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေအဆင်သင့်မရှိကြဘူးမဟုတ်၊သို့သော်၊လူအများနှစ်သက်စကားပြောဖြစ်ကြောင်းသောသူတို့အားသာအသုံးပြုပြီးကမ်ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အသီးအသီးအခြား။ သင်သည်မပြုလျှင်ကိုယ့်အကြိုက်ကစဉ်းစားပါ၊သင်စတင်တဲ့အခါသင်၏ချက်တင်ကစားတဲ့၊အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်ရှေ့တော်၌သင်ထိလာမယ့်-သင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအမြင်’သင်ဖွင့်တဲ့သူအတူချိတ်ဆက်။ ဟုတ်ကဲ့။ မတာဝန်ခံများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့မဖေါ်ဆိုဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အတွက်အသင့်ရဲ့ကျပန်းစကားပြော၊သင်ထိမှန်ပြောဆိုသို့မဟုတ်လာမယ့်ခလုတ်ကိုနှင့်သင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျပန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်အသစ်တစ်ခုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ သငျသညျဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနှင့်အတူစကားပြောလူတိုင်းကို။ သတိရ၊သင်ခံစားချင်တယ်ထဲကအများစုပါစေသင့်ရဲ့ကစားတဲ့အချိန်။ ကောင်းသောအရာတစုံတခုရှိကြောင်းအများကြီးရရှိနိုင်မှုမိတ်ဖက်ဖို့ဒါဟာတကယ်တော့င့်အသက်တာ၏အကြောင်းသင်သွားရ’ထုံး’။ ကမ္ဘာ၏အပြည့်အဝအမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏အချင်းနှင့်ကစားအမျိုးမျိုးရှိစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတော့နားလည်ကြောင်းအချို့အဆင့်မှာသင်ချိတ်ဆက်ထားမယ့်သူတစ်ဦးမှထဲသို့မဖြောင့်။ မယူကြဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် သတိရတွင်းအထင်အောက်ပါပေးတစ်တော်တော်လေးကောင်းသောအရသာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အလိုအကံကောင်းခြင်း၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ ကြိုးပမ်း။ မကြိုးစားသံသို့မဟုတ်ကြည့်ရှု။ ငါအသိခက်ပေမယ့်မဟုတ်ရင်သင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သာတက်အဆုံးသတ်ဖို့ပြောနေတာ ကိုယ်ခန္ဓာ။
ရှိခြင်းအသစ်တစ်ခုအပြင်မိသားစုအတွက်အမြဲပျော်ရွှင်အခါသမယဖြစ်ဖို့ဂုဏ်။ မိသားစုများဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်သော်လည်းပိုပြီးဝမ်းမြောက်သောစိတ်၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မိသားစုတိုးတက်မှုနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောပိုပြီး။ အခါတစ်မိသားစုကြိုဆိုအသစ်တစ်ခုကိုကလေးမိန်းကလေးသို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို၊သင်သိသောသူတို့ပြီးသားစိတ်ကူးသူတို့ရဲ့ကလေးမလေးတက်ကြီးထွားလာ၊တော်တော်ဆင်မြန်းနှင့်အတူကစားရုပ်နှင့် ။ မိခင်များမယ်လို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားသူတို့ရဲ့လူငယ်မိန်းကလေးနှင့်အတူတက်အဝတ်အစုနေစဉ်၊အဘတို့သက်ဝင်လိမ့်မည်ဟုမိမိတို့ ကျော်မိမိတို့၏အဖိုးတန်သောမိန်းကလေး။ တစ်စုံတစ်ဦးမှအနီးကပ်သင်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုဆိုကလေးမိန်းကလေးသို့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို။ ဒီနေရာမှာအချို့အလေးမိန်းကလေးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ကိုးကားသင်ဆန္ဒရှိသူတို့နှင့်အတူ။ အဲဒီအကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့်လူတွေကဟုပြောအတိုအမွှေးမှာကြိမ်။ သင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုအဖြစ်အမွှေးအဖြစ်အသစ်မိန်းကလေး သူတို့ကကြိုဆိုသို့သူတို့ဘဝတိုနှင့်အတူရိုးရှင်းသော်လည်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသတင်းစကားသည်ယနေ့နှင့်အတူအောက်ပါမက်ဆေ့ခ်ျများ။ အတိအမြဲက္ကဤအသစ်အကလေးငယ်ကိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိအောင်သူတို့ပင်ပိုပြီးအထူး။ မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မက်ဆေ့ခ်ျများရေးဖို့သို့မဟုတ်ကိုးကားသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်တစ်ကဒ်မှပူးတွဲဆုလက်ဆောင်ခြင်းတောင်းများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်မိခင်နှင့်ကလေးမိန်းကလေး။ မြးနှီး၊၊နို့ပုလင်းသို့မဟုတ်ပင်သေးငယ်တဲ့၊ပူနွေးစောင်မရကန်အမှန်အဖြစ်တန်ဖိုးအမူအားဖြင့်အသစ်ပါ။ ကျင်းပမွေးဖွားသေးသောအခြားတောက်ပနှင့်အနိုးကလေးမိန်းကလေးကိုယ့်ညာဘက်ကလိုကောင်းစွာသူတို့ကိုအစောပိုင်းအပေါ်။
မင်္ဂလာပါပိုက်ဆံ။ ၏သင်တန်း၊အကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသွား-ထ↑မြန်မာ့စွယ်စုံများမှာ၊ပေါလု့ကလေးကြီးကျယ်ပျော်ရွှင်နောက်ဆုံးတွင်။ ငါသည်လည်းအစဉ်အမြဲအငိုက်အတွက်ဟိုတယ်ဘားထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ဟိုတယ်၊ မှာ ၊နှင့်ခိုင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သည်ပြန့်ကျဲအမျိုးသားများနှင့်အတူသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးအသွားအပေါ်သောကြာနေ့ညဥ့်အခါ၊ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ယူသင့်ရဲ့ကောက်။ ရိုးရိုးသားသား၊ငါတီ၌နေထိုင်ခဲ့ယောက်၌အသက်အရွယ်၊ဒါကြောင့်ဤအကြံပြုချက်များကိုစေခြင်းငှါ၊နည်းနည်း ခေတ်မမီတော့။ ငါကျိန်းသေကြိုးစားဖို့အတူတကွသွင်းထားကောင်းလမ်းညွှန်။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်ငါအမှန်တကယ်သဘောတူလူမရောလမ်းပေါ်မှာ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံအမျိုးသားရောအပေါင်းတို့သည်အချိန်လမ်းပေါ်မှာ၊လူတိုင်းသိသောအသက်ရှိစဉ်အကြောင်းပြောနေတာယောက်ျားအဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေသူတို့ကိုပွင့်ကောက်ဖို့ကျွန်မအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ သူတို့ကအရမ်းအရှေ့နှင့်ကျန်ရှိနေသော။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ့ရည်းစားနဲ့ငါယူမှတစ်ဦးခရီးစဉ်ပဲရစ်မြို့အတွက်။ သာအမ်ိဳးခဲ့ကြကြောင်းလဲအားလုံးကျော်ကျွန်တော်တို့အတွက် ။ ငါ သောကြောင့်ငါမုန်းသောဧရိယာငါ့မိတ်ဆွေကြီးမင်္ဂလာ။ အစဉ်အဆက်ကတည်းက၊ငါသည်သာအတွက်နေထိုင်နည်းချက်သည်၊အမျိုးသားများမှာကြည့်ငါ့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်၊ဒါပေမယ့်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ တူတကယ်ကိုဘာမှမ။ ငါခရီးသွားလာတွေအများကြီးကိုပဲရစ်ဖို့အလုပ်အတွက်အရပ်နိုင်ဘူးတကယ်သိမှရ။ အိုး၊နှင့်ဟုတ်တယ်၊တချိန်ငါပြု၏တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းမှာမိတ်ဆွေတစ်ဦး့မွေးနေ့ညစာ၊သူလုံးဝစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်တစ်ဦးရွှေး။ နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မသဘောပေါက်သူအရမ်းလက်ထပ်။ တစ်ဦးအင်္ဂ ။ ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့ကလုပ်ပါ? ကျွန်တော်ထင်လန်ကောင်းဤအမှု၌။
ပြင်သစ်မိန်းကလေးဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်အက္ပ္ကိုလိုသူလူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစကားပြောရောသို့မဟုတ်ရက်စွဲနှင့်အတူပြင်သစ်မိန်းကလေးနှင့်ပြင်သစ်လူမျိုးသို့မဟုတ်ကျပန်းစကားပြောပြင်သစ်အမျိုးသမီး။ ကျနော်တို့သွန်သင်မည်အကြောင်းသင်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူပြင်သစ်မိန်းကလေးနှင့်ပြင်သစ်မင်္ဂလာဆောင်နှင့်တွေ့ဆုံတစ်ခုတည်းပြင်သစ်မိန်းကလေးနှင့်မည်သို့မှလူသစ်ဖြည့်ဆည်းချက်တင်နှင့်အတူစိမ်းကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပြင်သစ်မိန်းကလေး။ ရှာနေပြင်သစ်မိန်းကလေးမှာသုံးစွဲသူပရိုဖိုင်းအပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဘယ်တော့မှအမှန်တကယ်အစည်းအဝေးဆိုသည္။ ကိုယ့်ပွတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ခု၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူအများအပြားကိုမ်က္ႏွာအတွက်စစ်မှန်သော-အချိန်။ မိတ်ဆွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားဖြင့်ဗီဒီယိုချက်တင်နိုင်သောနှင့်ရွေးကျားမနှင့်ဒေသဦးစားပေးမျိုးသမီးအများစုကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစကားပြောခန်းများအတွက်ကျပန်းအုပ်စုချက်တင်ပဲရစ်လေမြို့-မိုက်ကယ်ဗာမြို့တွင်ပြင်သစ်လှည့်ဖျား عینک آفتابی زنانه ليون ကြင်စာမ်က္ႏွာ-ဓာတ္ျ ဘယ်လိုမှကျပန်းစကားပြောအုပ်စုနှင့်အတူပြင်သစ်မိန်းကလေးအခမဲ့ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစကားပြောလမ်းညွှန်နှင့်အတူပြင်သစ်မိန်းကလေးဘယ်လိုအုပ်စုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးဘယ်လိုမှချိန်းတွေ့နှင့်အတူပြင်သစ်မိန်းကလေးဘယ်လိုရွှေ့ဖို့ပြင်သစ်မှမင်္ဂလာဆောင်နှင့်အတူပြင်သစ်မိန်းကလေး။ ခံရဖို့ပြင်သစ် နိုင်ငံသားနှင့်၎င်းတို့၏အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှု။ ဤသည်သာလမ်းညွှန်အက္ပ္ကိုအသာမသုံးနိုင်ဘူးကိုအွန်လိုင်းချက်တင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတောင်းဆိုထားပေမယ့်ကျွန်တော်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးအကျိုးအတွက်ပြင်သစ်မိန်းကလေးဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များမှလူသစ်ဖြည့်ဆည်းချက်တင်နှင့်အတူစိမ်းကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။
ပြင်သစ်စကားပြောအကောင်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဘို့အင်္ဂလိပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံက၊ ပြင်သစ်ချက်တင်၊အွန်လိုင်းချက်တင်ပြင်သစ်စကားပြောခန်း၊စိမ်း ပြင်သစ်ချက်တင်ချက်တင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံက။ ပြင်သစ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အံ့သြဖွယ်သောပြင်သစ်လူမျိုးအွန်လိုင်းရှာတွေ့၊ပြင်သစ်မိန်းကလေးပြင်သစ်ကောင်လေး၏သဘာဝကိုနေ့စွဲအွန်လိုင်း။ အခမဲ့ကျပန်းချက်တင်သို့မဟုတ်အမည်မသိစကားပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်သစ်စကားပြောခန်း။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာပြင်သစ်စကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ကြိုဆိုပါတယ် အခမဲ့ပြင်သစ်စကားပြောခန်း။ တွေ့ဆုံပြင်သစ်စိမ်း၊ပြင်သစ်တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏စကားပြော၊ဒီနေရာမှာမြှောက်နိုင်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောပြင်သစ်နှင့်အစိမ်း။ အခမဲ့ပြင်သစ်စကားပြောကျွမ်းကျင်မှု၊နှင့်အတူလွယ်ကူသောလက်လှမ်း:တဦးတည်းကိုနှိပ်ပါမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဂူ၊၊အဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်မရှိ၊တည်ဆောက်ခြင်း၊အဘယ်သူမျှမစောင့်၊အဘယ်သူမျှမရှည်ရှည်သင်္ကေတရာ ။ ဒီမသာပေမယ့်ပိုပြီးကျော်ရောက်ရှိမှာအရင်းအမြစ်သောသက်သေပြခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ကပင်အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာအ ဆာင္မွဳ၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊ပြင်သစ် ဗီဒီယိုချက်တင်၊ပြင်သစ်စိမ်း ။ ထိုအခါဤသည်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့လမ်းရှိသည်ဖို့ချက်တင်အတွက်ပျော်စရာ။ ပြင်သစ်စကားပြောခန်း၊ ပြင်သစ်ချက်တင်၊အွန်လိုင်းချက်တင်ပြင်သစ်စကားပြောခန်း၊စိမ်း ပြင်သစ်ချက်တင်ချက်တင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံက။ ပြင်သစ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အံ့သြဖွယ်သောပြင်သစ်လူမျိုးအွန်လိုင်းရှာတွေ့၊ပြင်သစ်မိန်းကလေးပြင်သစ်ကောင်လေး၏သဘာဝကိုနေ့စွဲအွန်လိုင်း။
မသာအသုံးဝင်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အဆင်ပြေသောလမ်းကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အင်တာနက်။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖြည့်စွက်အျပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရန်အဘို့အ။ ကိုယ့်နှိပ်’စ’နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းစတင်၊အသုံးဝင်သောနှင့်သာယာသောအသိအကျွမ်းကြ သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ မိနစ်အကြာမှာအမေ့။ ဒီထက်ပိုကောင်းဆိုရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲသောကြောင့်၊အားလုံးအစစ်အမှန်။ အရေးအကြီးဆုံးက၊အားလုံးအားသာချက်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သူအသံနှစ်သက်ဖွယ်။ သင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သူေျပာ၊အဘယ်သို့စိတ်ခံစားမှုခံစားရနိုင်၊စဉ်းစားမိမိက်ာက္သား၊ဘယ်လိုသူမှိတ်အခါလှိုင်းတံပိုးနှင့်အများအပြားအခြားအင်္ဂါရပ်။ ပိုကောင်းဒီထက်သာတဲ့အသက်ရှင်သောချက်တင်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်ကောင်းခဲ့နေ့စွဲအပေါ်သွား’ကန်း’ရှိသောအခါ၊သာတလိုဆန္ဒမှလွတ်မြောက်ရန်အလျင်အမြန်။ သာကမ်ချတ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲသည်အယျအပေါ်’ဆက်လက်’သော၊အဖော်၊အသစ်အတွေ့အကြုံ။ သင်ရွေးချယ်သည့်အခါရပ်တန့်သည့်အခါမှရှေ့ဆက်သွား။ သင်စောင့်ရှောက်ဘို့တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်နာရီသာတဦးဖြစ်တဲ့ကိုလေ့လာစူးစမ်းချင်တယ်။ စကားပြောသင်ပေးသည်ဖြည့်စွက်။ ပါဘူးခံစားမိပိတ်မိ၊သင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဆက်မပြတ်နာရီကိုကြည့်၊စဉ်းစား၊’အလိုအလျင်အမြန်အချိန်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ပြောင်းပြန်၊ရှိပါတယ်သည့်အခါတစ်ဦးလျင်မြန်စွာနှင့်သာယာသော။ ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဆက်သွယ်သည့်အခါ၊ကူညီရပိုမိုနီးကပ်စွာအခြား ပါတီ? သင်သာအကြား၊ဒါပေမယ့်လည်းအမြင်ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းသူ၏မျက်နှာအမူအရာနှင့်အမူအရာ။ ကမ်သိရန်ကူညီပေးသည်အ ပိုကောင်းကြောင့်ပြသသူခြင်းမရှိဘဲ၊အလွန်အကျွံပန္မႈ။
ပြင်သစ်စကားပြောအသစ်အတွက်အင်္ဂလိပ်လူမျိုး။ ကျပန်းချက်တင် မႈမ်ား
မင်္ဂလာပါ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳကျပန်းစကားပြော ။ ဒီဘလော့ဂ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည် မွ။ အတွက်နေ့တိုင်းအဲဒီစကားပြောသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ၊ချက်တင်နှင့်ပျော်စရာရှိသည် လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာကနေအကြောင်းသင်သိချင်နှင့်အသံုုးခ်စိမ်းတွေနဲ့အတူ။ တိုင်း အခမဲ့သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်အပေါ်သူတို့ကြိုးစားနိုငျအားလုံးအချိန်သင်လုပ်ချင်တယ်။ ထိုအခါအဘယ်အရာကိုသင်စောင့်ဆိုင်း။ ကြိုးစားကြကုန်အံ့။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါအသစ် သည်။ ဒီမှာဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်အတူစကားပြောလူတွေအများကြီးကနေသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာပြင်သစ်သင်မူကားလည်းအသံုုးခ်ကျပန်းနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာကနေ။ ဒီစကားပြောခဲ့တဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။ အများစုမှာအမျိုးသားများဒါပေမယ့်သေချာသင်ရှာတွေ့နိုင်ကောင်းတစ်ခုအရေအမျိုးသမီး။ အ အသစ်တစ်ခုကိုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဟုိျ:ချိန်းတွေ့၊အစည်းအဝေးနှင့်ပရောလွယ်ကူများမှာဒီမှာပါ:သင်ရုံလိုအပ်တဲ့အကမ်အလုပ်ဗီဒီယိုစကားပြောသို့မဟုတ်ရှိသည်မပြုလျှင်သင်သာသုံးနိုငျသစာသားမည္။ ဒီချက်တင်ကအခမဲ့သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ လစာအတွက်ကစမ်းကြည့်ပါ။ ထိုအခါအဘယ်အရာကိုသင်စောင့်ဆိုင်း။ စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့။ အ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်၊ထိုအများ၏စိတ်ကူးလူငယ်တစ်ဦးရုရှားကောင်လေးတစ်ယောက်။ သူလုပ်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်အတူမူအရရုရှားကစားတဲ့၊တစ်ဦးကျပန်းအသံုုးခ်နှင့်အတူစိမ်း။ ဆိုလိုကြောင်းသင်မသိသူအနောက်ဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်အ ။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုနှင့်အခုကအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ချက်တင်လောကအတွက်။ မှတ်မိဖို့လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်ုပ်တို့၏အခြားသူများက:အထိ၊အီတလီ၊ဂျာမနီနှင့်ပို။
ဆိုက်ကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ပြင်သစ်တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တဦးခ်င္းအခမဲ့နှင့်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းရှာတွေ့မှအခြားပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်ရှာဖွေနေများအတွက်ပျော်စရာ၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊သို့မဟုတ်ချစ်ကြည်။ ပို့စ်အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာသို့မဟုတ်ရာက္ၾကြော်ငြာ၏အခြားရရှိနိုင်တစ်ဦးတစ်ပြင်သစ်တွင်ရှာဖွေရန်အသစ်တစ်ခုကိုရည်းစား၊ရည်းစား၊မိတ်ဆွေ၊သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏တဦးခ်င္းအခမဲ့တက်လက်မှတ်ထိုး။ မင်္ဂလာပါ။ ထိုနေ့ကြွလာသင်အဘယ်သို့နားလည်ဘေးအကြောင်းပြောဆို၊ဘယ်လိုငါ့ဒဏ္ဍာကထက်ပိုကြီးဖြစ်ကြဖြစ်ရပ်မှန်၊ငါ့လုပ်ရပ်ထက်ပိုကြီးတဲ့သီလ၊ငါ့သီလထက်ပိုကြီးအံ့ဖွယ်အမှု။ တစျနေ့၌သင်တို့သည်နားလည်ကြလိမ့်မည်။